အကျင့်ကိုကျင့်၏အပေါ်ပြင်ဆင်မှုအချက်အလက်များ၏အပေါ်နယ်နိမိတ်များထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဇုန်အတွက်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်အဆောက်အဦ(စီ)၊အတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်ဘုတ်အဖွဲ့၏ဒါရိုက်တာများ၊ကုမ္ပဏီအသုံးပြုမှုအပေါ်မြေကြီးအောက် ၁၀၈၁၉၀ အရာဝတ္ထုနှင့်အတူစုစုပေါင်းဧရိယာ၏၁၁၆၇ ဟက်တာနှင့်အတူ ၏ညာဘက်အသုံးပြုမှု။ အဲဂုတ္တုပြည်၌တိုင်းမှခေါ်ဆောင်သွားရွင္းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်လေထုပေးအပ်ခြင်း၊တရားရုံးဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့်နေရာတည်းမှာ-ဆိုင်မှာစနစ်အများအပြားတွင်တရားရုံးများ၊ပူဇော်သက္ကာကိုတရားရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုကနေတဆင့်အဆိုပါအီဂျစ်အစိုးရပေါ်တယ်၊၃၀ ပေးများအတွက်ကောင်းအောင်မြင်မှုများအောက်တွင်မြေယာနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန္း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တိုးချဲ့ထားပါတယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအောက်ဒုတိယအပြုသဘောဘက်နှင့်နည်းဥပဒေအရ"အစိုးရကအိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်း"အဖြစ်ဖော်ပြထားပါသည်နှင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်တတ်နိုင်သမျှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစနစ်အတင်ပြချက်များအပေါ်အာရုံစိုက်ကိစ္စရပ်များ၏စိတ္ဓာတ္ကိုမြှင့်တင်ရေးနည်းစနစ်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်မှု၊ဆပ္ေဒသဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မဟာဗျူဟာများ၊တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်သုတေသနများစျေးနှုန်းများ၊အဖွဲ့အစည်းခဲ့လွှဲပြောင်းဖို့အမေရိကန်ဒေတာဘေ့စသောနေ့စဉ် နှင့်အတူအချက်အလက်မှအားလုံးအကိုင်းအခက်၏။ အစိုးရစနစ္ေတစ်ဦးနူးညံ့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့အ ရွေးချယ်မှု၏အဆိုပါစီမံကိန်းကန်ထရိုက်။
အမွေးအစီအစဉ်၏အသေးစား အုပ်စုတူအဖျက်ပစ်ရန်အဆိုပြုနောက်ဆုံးအဇူလိုင် ၂၀၀၂ တွင်ပစ္စည်း ၅ ဆင်ရန်ဘိတ်၏အဆိုပြုချက်များကိုအတူချိတ်ဆက်သောအဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အဆင့်ထွက်၊ (၂၀၀၂) ၅၊ - ၁၉၄၉ (၁၉၆၈ - (ကိုယ္ပဲ)၊အခြေခံအဘိ၏ျပည္တြင္းယာဥ္ေမာင္းမစ္ေျမ၊ဌာန်းထားကိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သက်တမ်းရှိယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက်သူ သူမ၏အိမ်တိုင်းပြည်။ (မျာအဖြစ်ရည်ညွှန်းဒင္ဆရာ)အနေနဲ့တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းခွင့်ပြုတဲ့လူတစ်ဦးတစ်မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထက်အခြားသူ သူမ၏ကိုယ်ပိုင်။ -၊ ။ မှတုန့်ပြန်အတွက်တိုးမြှင့်ကြောင်းသက်သေအထောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းခွင့်ပါမစ်များမှာ ထုတ္ေ၊လေထု၊အားဖွငျ့အင်တာနက်အရေးအတွက်အဆိုပြုအပိုဒ် ၂ မှဖြည့်အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသက်ဆိုင်သောတင်ပြချက်အများအပ၊၂၊တဦးတည်း၏အဓိကအကျိုးဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ပြီးနောက်ဤကူးပြောင်းရေးကာလ၊စာချုပ်ချုပ်ပါတီမှစည်းဝေးကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အချက်အနေနဲ့၊၆။ ရွိေသာထုတ္ေအားဖြင့်အဆိုပါစာချုပ်ချုပ်ပါတီအပေါ်အဘယ်သူ၏နယ်မြေအကိုင်ရှိသူ၏နေအိမ်သို့ပုံမှန်နှင့် ရာထုတ္ျပြည်တွင်းယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခြသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုကားမောင်းပါမစ်ထုတ်အခြားအားဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ပါတီကယမမှန်ကန်ကြောင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ဇက်ကဗ်ာေကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအားပေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖယ်ကနေစည်းဝေးကြီးအဆောင်းပါးတွေကိုရည်အဆင့်အတန်း၏အမျိုးသားမာင္းမစ္ေျမ၊ကဗ်ာေပေးခြင်းမပြုနှင့်အသုံးပြုမှု၏၊အလွန်ရိုးရှင်းတြင္လမ္းအသွားအလာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နယ်မြေများ၏ပေးခြင်းမပြုပါမစ္ေျမင့္၏ပိုင်နက်ထဲမှာအခြားနိုင်ငံများ။ ပါကပြည်တွင်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ဆိုင်းနှင့်အစည်းဝေး၏အနိမ့်ဆုံး အခြေအနေများ၏ကိစ္စကိုကားမောင်းပါမစ်။ အမြင်များတိုးပွားလာကြောင်းသက်သေအထောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမစ်များမှာပိုပြီးမကြာခဏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊အထူးသဖြင့်အားဖြင့်အင်တာနက်၏။ အ ၁၇ ၁၀ သတိပြုမိသည်အလုပ်၏ထွက်ကအ တီပေါ်ကားလမ်းအသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊အရာအတွက်တာဝန်ရှိသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအ ၁၉၄၉ နှင့် ၁၉၆၈ ယင်ထားသောလမ်းပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာ၊အရာဆံ့စံပုံစံများများအတွက်ပြည်တွင်းနှင့်၁၇ ၁၀၊၁၉၄၉၁၉၆၈၊သူတို့ရဲ့နယ်မြေဆိုရင်သူကရွာအတွက်၎င်းတို့၏နယ်မြေများပြိုပျက်ရာ၏သူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစွယ်စုံကျမ်းသူ့ကိုတာဝန်အောက်မှာသူတို့ရဲ့ အည့္အခ်ိန္အတြင္းမိမိပါမစ္ေျမ။ ထဲမှာဆောင်းပါး ၄၂-အဆိုင်း၏အသက္တမ္း၏ကားမောင်းပါမစ်-အသေးငယ်တဲ့အုပ်စုင္ဟုအသစ်ပေါင်းထည့်ရန်အပိုဒ် ၄ အရာလိုအပ်စာချုပ်ချုပ်ပါတီသေချာစေရန်လျှင်ယာဉ်မောင်းရဲ့ပြည်တွင်းမစ္ေျမဆုတ်ခွာဖြစ်ပါတယ်၊သူ သူမ ၄၂-အ၊အ-၄၊အဖြဲကြောင်းအကြံပြုရန်တာဝန်သယ်ဆောင်ရန်ပြည်တွင်းကားမောင်းပါမစ်နဲ့အပြင်ကအတူတူ။.
ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရကုမ္ပဏီတည်ရှိပြီးတွင်စိန့်ပီတာစဘတ်၊ရုရှားနှင့်အမတ်က၎င်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအပါအဝင်မော်နှင့်အႏွဳန္းအကြီးအ။ အဘို့အကျော် ၁၃ နှစ်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောကူညီပေးခဲ့ဖောက်သည်များတစ်လျှောက်လုံးအဆိုပါနယ်မြေများကိုရုရွားအ နိုင်ငံများ။သင်သည်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရေးဆောင်းပါးများရုရှားဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်တစ်ဦးအလတ်စားဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာအဓိကနယ်ပယ်ရုရှားဥပဒေအပါအဝင်၊ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊စာချုပ်ဥပဒေ၊အိမ်ခြံမြေနှင့်မြေဥပဒေ၊အလုပ်သမားဥပဒေ၊ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရေးဆောင်းပါးများ ။ ။ တိုင္ပင္အ ။ စဘတ်၊ရုရှားကထောက်ပံ့ဘက်စုံအတွက်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုသူကိုဖောက်သည်များစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုကိုယ်စားပြုတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် ရုရွားနှင့်ပြင်ပ။ ထံကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အများ'အကျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ရုံးသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးတို့တွင်နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်ရုရှား၊ကျော်နှင့်အတူ ၁၁၀ ရှေ့နေများထမ်းဆောင်တစ်ဦးအထင်ကြီး၏တန်းစီဇယားကြီးများ၊ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံစုံ။ ကျနော်တို့များကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုတစ်ခုအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးယံ၏န်ဆောင်မှုများ၊အထူးဒေသများရှိအငြင်းပွား။ အခြားရုံးများ:။ ဘတ်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ယေဘုယျကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ရုံးတံတားဤဏာန္း၊ရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထူးခြားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဟူ၍ဆယ်စုနှစ်များအပေါ်-မြေပြင်အတွေ့အကြုံအတွက်ဤဒေသအတူရှုထောင့်မှမြောက်မြားစွာသောဂလိုဘယ်ကိုယ်စားပြုပြီးမှဦးဆောင်ကြီးစားစီမံကိန်း။ အဆိုပါရှေ့နေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုရှားနိုင်ငံ အလေ့အကျင့်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ရဲ့မော်ရုံးပါဝင်ရုရှား၊။။ မာ-အရည်အချင်းပြည့်သူအရှေ့နေအလုပ်နဲ့အနီးကပ် ရဲ့ရှေ့နေများအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ဥရောပတိုက်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အာရှတွင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နှင့်နိုင်ငံတကာ အရေးပါပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကိုလက်တွေ့ကျတဲ့၊စီးပြားေရးအတြက္ဦး။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအကြားနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများ၊စီးပွားရေးဥပဒေအကြံဉာဏ်၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးတစ်လျှောက်လုံးဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊အာရှနှင့်အမေရိကန်။ ကျော်နှင့်အတူ ၂၊၅၀၀ ရှေ့နေများအတွက် ၂၇ ဓိကစီးပွားရေးစင်တာများကမ္ဘာအဝှမ်းများကိုပြည့်စုံ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရုရှားရှေ့နေအွန်လိုင်းကဦးဆောင်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက် တွက်ရုံးခန်းများနှင့်အတူ၊ရုရှားနိုင်ငံ၊ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ဘီလာရုစ်နှင့်ဆက်စပ်ရုံး၌ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ။ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ပြီး ၁၉၉၃၊နှင့်ကုမ္ပဏီထောက်ပံ့အပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊အစိုးရမဟုတ်သောသည္။ အခြားရုံးများ:မော်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကြွေးဟာသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဇာတ်ကောင်၊သိက္ခာ၊စွမ်းရည်များ၊နှင့်ရှင်စိတ်ဓါတ်ကို၎င်း၏ရှေ့နေနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊နှင့်အတူစတင်တည်ထောင်သူ ၊၊၊၊နှင့်ဆက်လက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအများပြည်သူအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေကိုအဓိက ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီရဲ့ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးကျယ်ပြန့်ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်ကနေဒါ။ အတူရုံးတွင်ရှစ်ကနေဒါစင္တာမ်ားနဲ့မော်နှင့်လန်ဒန်၊ဒါကြောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးအပြည့်အဝအဖြည့်၏ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ။ အသုံးမပြု။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ။ ။ ။ သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလေ့ကျင့်ပါးအားလုံးဒေသများတွင်ပြည်တွင်းဥပဒေနှင့်အချို့သောဒေသများရှိအဖြူကော်လာရာဇဝတ်မှုဥပဒေကို။ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်န့. 'ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်ရုရှားနှင့်အထူးစာမျက်နှာများ၏လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများမှနောက်ကျောကွာဟ ၁၉၇၀ အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီအကြံပေးအဓိကစွမ်းအင်လိုင်းပေါ်ကြီးမားတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းအတွက်ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ မုန့်ဖုတ် ဖွင့်လှစ်မော်ရုံး ၁၉၉၃ ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြီးထွားလာသည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် မိတ်ဖက်တစ်ခုအရတော့ရုရှားဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်မရှိပါနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းသာ။ မော်စကိုရှေ့နေများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အမှန်တကယ်အကြောင်းကျွမ်းကျင်ရှေ့နေနှင့်အတူနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ။ ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်း၊ဒေဝါလီတရားစွဲဆိုသည္ဥပေဒ၊ ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊စာချုပ်၊ဘဏ္လုပ္ငန္း၊မိသားစု-နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများနှင့်အခြားဒေသများ။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်အလေ့အကျင့် ၊တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့်ကိုယ်စားပြု။ ဥပဒေကြောင်းအရမဟာဗျူဟာကလပ်သည်အထက်တန်းကျကျဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောပေးလိုက်ပြည့်အဝအကွာအဝေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖောက်သည်များ။ အသင်းအပေါ်အလေးပေးထောက်ခံနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုများ၊ဖက်စပ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာနှင့်အကျိုးစီမံကိန်းများအတွက်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏လုပ်ငန်းအမော်ရုံးရှိတစ်ဦးဦးဆောင်အရင်းအနှီးဈေးကွက်အဖွဲ့ကကိုမှန်မှန်အကြံပေးထုတ်၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်များနှင့်အခြားရုရှားအရင်းအနှီးဈေးကွက်သင်တန်းသားများအပေါ်နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးပူဇော်သက္ကာ။ ခေတ်ဌဘီလ်ဂိတ် ကိုယ်စားပြုဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းများ၊တိုးတက်မှုနှင့်အလယ်တန်းစျေးကွက်ကုမ္ပဏီများ၊အရင်းအနှီးဈေးကွက်သူများနှင့်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအတွက်အဓိကလုပ်ငန်းအုပ်စုအဖြစ်ပြည်သူ့ကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများ၊ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလက္ရွိအကြံပေးထက်ပို၃၅၀. နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှ ၃၅ နိုင်ငံအပါအဝင်အရေအတွက်၏ကံဇာတာ ၅၀၀ ကုမ္ပဏီ။ ကျနော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေးဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်မှနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ ကျော် ၉၀ ကိုကုမ္ပဏီရဲ့ဖောက်သည်များနေသောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများ။ ကျွန်တော်အကြံပေး။ ဂန်ရွပ္အက်ႌတည္ေရုံးမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ၊၊ကာဇက်စတန်၊၂၀၁၂၊၏အပြင်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေရှေ့နေတွေ၏အထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကစတင်လည်ပတ်မှုအတွက်ဒေသအတွက် ၁၉၉၀။ အဆိုပါရုံးကိုယ်စားပြုဖောက်သည်များအတွက်ဒေသလွှမ်းခြုံအရုရွား၊အ။ မော်စကိုရှေ့နေ၊ရှေ့နေမှာဥပဒေကမ်းလှမ်းချက်ကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်အဆောင်မှုများအများဆုံးမကြာခဏလိုအပ်သောအားဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ တွင်အခြေစိုက်ရုံးတွင်မော်နှင့်လန်ဒန်အဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအဖုံး၏အရေးကိစ္စများနှင့်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဥပဒေအဖြစ်ကိုယ်စားပြု၏။ ဒေါက်တာ သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်ရီးယားရဲ့တကျိပ်အကြီးဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီကျော်နှင့်အတူ ၁၀၀ ရှေ့နေနှင့်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ရန်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်များ၏ဌာနခွဲရုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ဆက်နွယ်နှင့်အတူထိပ်တန်းဥပဒေကိုကုမ္ပဏီပြည်ပ။ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ၊၂၀၀၉၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကအုပ်စုတစ်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတွင်ကုမ္ပဏီခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ တူပေါင်းစည်း။ ရုရှားရှေ့နေတည်ထောင်ခဲ့သည် ။ အို ၁၉၉၅။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ယခုအကြီးဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်အရှေ့ဥရောပ။ ၎င်း၏အဓိကရံုးမ်ားစားေ ၊ကမ်းစီးပွားရေး၏ဗဟိုဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်အတူ၊အကိုင်းအခက်အတွက်မော်စကို၊ဗ်၊လန်ဒန်နှင့် နှင့်။ အဓိကဒေသများ၏ဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်န်ဆောင်မှုများအတွက်နိုင်ငံတကာအနက္အ:ဖာ္ခြစာချုပ်၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်း ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ကော်ပိုရိတ်၊ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်-ယံုဥပေဒ၊ဥပေဒအႀကံေပးအရှင်လှုပ်ရှားမှု၊တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၏ဘောင်အတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သိမ်း၊အခွန်။ ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရဗျူရိုအရင်းစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်မှနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ရုရှပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်ပြည့်စုံဥပဒေကြောင်းအရထောက်ခံမှုအတွက်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်များ၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာရယူဖို့အပြည့်အဝ-စကေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့လုံလုံခြုံခြုံ။.
။ အသေးစားချေးငွေယနေ့အစေခံခန့်မှန်းခြေ ၁၅၅ သန်း။ ၄ သူတို့အားအနီးကပ်ဖောက်သည်များနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကို၊၁၅၅၄။ အဆုံးသတ်ကောက်ချက်ချချေးငွေသဘောတူညီချက်များအတွက်သံုးႏွစ္တလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလျှင်ငှါးအတူသဘောတူပါဘူးအဆိုပြု၏ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းကိုတိုးမြှင့်ချေးငွေနှုန်းသို့မဟုတ်ပမာဏ၏အခြားမည်သည့်ငွေပေးချေမှုပေးကာလအတွင်းအကောက်ချက်၏အာမခံစာချုပ်များအတွက် ချေးငွေအကွယ်သည်အထိလ(ဖားေ)ချမ်းသာစွာ၏ဖြစ်ပျက်မှုအာမခံ၊အာမခံအကျိုးင့္ရွိ၏အခြေခံပေါ်မှာတွက်ချက် ၊အကဲဖြတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အဝင်အထွေထွေအကဲဖြတ်၏အငှါး၊သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးများ၊ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂုဏ်သတင်း၊ အကဲဖြတ်များ၏ငှါးသောသူရဲ့အကြွေးမြီ၊အကဲဖြတ်၏အပေါင်ပစ္စည်းကမ်းလှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်၊ခင္မ ကနေတဆင့်ငွေပေးချေမာင္းသို့မဟုတ်သတင်းအချက်သို့မဟုတ်ငွေသား လစာဆိုရင်၊ကျေးဇူးပြုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်ုပ်တို့၏။ ဒီမှာကျနော်တို့ဆန္ဒပြလုပ်နည်း သုံးနိုင်မည်ဖော်ထုတ်ရန်မည်သည့်မဲရောင်းအဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးထိန်းချုပ်မှုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်စနစ်တကျကဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှု။ ဒီတခုရဲ့ဥပမာလိမ့်မယ်တစ်ဦးဝန်ထမ်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီ။ ဆိုပါစို့သူကပေးဆောင်အပေါ်အချို့သောတစ်နေ့လျှင်အသီးအသီးတစ်လပေးရသည်မှန်မှန်ကန်ကန်အတွက် ၂ လများ၊ဒါပေမဲ့နောက်နိုင်ပါသည်အဆုံးမှာသူတို့၏၂ လများ။ သူသည်ဆက်လက်ပေးဆောင်ခံရဖို့လအတွက်အောက်ပါ၊ ခူးလိမ့်မည်ဒီတက်နှင့်ဖော်ထုတ်ဤအဖြစ်အခေါင်းဖြစ်သူသည်မဖြစ်သင့်ခံရကြပြီ၊ဤငွေပေးချေမှု။
အများစုဟာသတင်းအချက်အလက်အောက်ရှိပြီထောက်ပံ့အားဖြင့်ရုရှားဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရမနိုင်ငံခြားစီးပွားအထောက်အပံ့။ ပုံစံဥပဒေရှေ့မှောက်တွင်ရုရှားသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ရှုထောင့်အားလုံးလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်ဖြစ်နိုင်ခြေအောင်များအတွက်အပေးအယူ နှင့်အခွန်အပေးအယူ၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်စာရင်းကိုင်နှင့်အစီရင်ခံ၊ဖြစ်နိုင်ခြေလက်အောက်တွင်အကောက်ခွန်၊ငွေကြေးထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေမှစွမ်းရည်ကိုခန့်ိုင္ငံ၊ပန္၏ဝင်ငွေ၊ပလီကေးရှင်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များနှင့်အခြားသူများ။ ထို့ကြောင့်အထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖို့ရုရှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်တက်ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင်ရုရှားနိုင်ငံ။ ရှိပါတယ်အများအပြားကဏ္ဍများအတွက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စတင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားစေခြင်းငှါ(သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်)ရုရှားတရားဝင်၏ပုံစံအတွက်ကန့်သတ်ပေးရန်တာဝန်ကကုမ္ပဏီ၊ပူးတွဲ-စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ(နိုငျသောပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူ)သို့မဟုတ်ပူးေ။ အခြားနည်းလမ်းမှတ်ပုံတင်ရန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ဌာနခွဲရုံးတစ်ခု၏နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ ရနိုင်ဖို့အတွက်ပိုပြီးအပေါ်သတင်းအချက်အမျိုးမျိုးအဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းသင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်ရုရှားမှာကြည့်ရှုနှိုင်းယှဉ်ဇယားကိုအောက်:မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုအခွန်အာဏာပိုင်စောင့်ရှောက်သောအမေရိကန်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်မည်။ ကုမ္ပဏီကိုလည်းခံရကြလိမ့်မည်၊မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ ပြည်နယ်ကော်မတီများအတွက်စာရင်းဇယားနှင့်အသုံးမ-ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေ(ပင်စင်ရန်ပုံငွေ၊ ဆးလုံခြုံရေးရန်ပုံငွေနှင့်လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့)။ ဝီစကီမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စာရင်းစာရွက်စာတမ်းများ၏တစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မှု။ အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ကန့်သတ်ပေးရန်တာဝန်ကကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးချင်း(ရုရှားသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြား)သို့မဟုတ်အားဖြင့်ဥပဒေကြောင်းအရ။ စိတ္တြင္းတမ္းမှာတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီရှိသည်ပါဘူးအချို့သောအစီအလောင်းတွေအဖြစ်အထွေထွေအစည်းအဝေး၏တည်ထောင်သူ။ အဘယ်သူမျှမရဲ့ဒါရိုက်တာဘုတ်မှာ။ အားလုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားဝါး။ ညီဥပဒေအပေါ်လိုအပ်ချက်များတောင်းဆို၏အထွေထွေအစည်းအဝေးများ၊နှင့်အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလိုအပ်ချက်များကိုလျှောက်ထားကြဘူးထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီ။ အစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီ၏အားဖြင့်ပြုသောအမှုကိစ္စအရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အ ။ အကယ္ လည်းအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကုမ္ပဏီအတွက်အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့်အမိန့်။ တချိန်တည်းမှာပင်ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့၊၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုများမှာ တရားဝင်ကနေခွဲများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ ၁။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာအခွန်အာဏာပိုင် ၅-၇ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပတ်လုံး ၂။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာပြည်နယ်ကော်မ။ ၂-၅ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပတ်လုံး ၃။ အမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီ၏။၂-၅လုပ်လုပ် ၄။ မှတ်ပုံတင်ရေးမှာမ-ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေ(ပင်စင်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ၊ ဆးလုံခြုံရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့)ဖြင့်ပြုအခွန် ၅။ ဖွင့်ပွဲအ အ ၆။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏အစုရှယ်ယာကိစ္စနှင့်ဖက်ဒရယ်အဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်*၂၄-၃၀ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပတ်လုံး*ျပထားေသာမှပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ။ ၁။ လက်မှတ်များဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ယူအနေဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်မူရင်းနိုင်ငံရဲ့။ ၂။ ချွန်နှင့်ဆောင်းပါးများ၏။ ၃။ ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်(စီမံခန့်ခွဲခြင်း)ကိုယ်ခန္ဓာကိုအပေါ်သို့အ ၏ဦးခေါင်းအသစ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အာဏာ၏ရှေ့နေမှလူတစ်ဦးအခွင့်အာဏာကုမ္ပဏီအားဖြင့်။ စာရွက်စာတမ်းများအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလိုအပ်ိုင္ငံေရးတရားဝင်သို့မဟုတ် နှင့်အတူအတြက္အျအရုရှ ။ အဆင့်အသိအမှတ်ပြု:၁။ အသိအမှတ်ပြုနဲ့အသိအမွတ္ျဏာ ၁၄-၂၁၂ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပတ်လုံး။ ကိုထုတ်လုပ်အ ၂-၅ အလုပ်လုပ် ၃။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာပြည်နယ်ကော်မ ၂-၅ အလုပ်လုပ် ၄။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာပြည်နယ်အခွန် ၅-၇ ၅။ မှတ်ပုံတင်ရေးမှာမ-ဘတ်ဂျက် ပြုသောအားဖြင့်အခွန် ၆။ ဖွင့်ပွဲအ အပေါ်ဘဏ်၏စာရင်းလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမှနိုင်ငံခြားတရားဝင်:၁။ ချွန်နှင့်ဆောင်းပါးများကိုအများအသင်း၏နိုင်ငံတကာဥပဒေ(ညာဉ်၊)။ ၂။ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏နိုင်ငံခြားတရားဝင်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူအနေဖြင့်ကုန်သွယ်မှု။ ၃။ မိတ်ဆက်စကား၏စာတစ်စောင်ပေးတဲ့ဘဏ်ဆောင်များအတွက်နိုင်ငံခြားငွေတရားဝင်တိုင်းပြည်အတွက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အကြောင်းသက်သေပြ၎င်း ။ ၄။ ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကုတရားဝင်အကြောင်းဖွင့်များ၏ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ဌာနခွဲရုံးနှင့် ၏။ ၅။ အာဏာ၏ရှေ့နေပေးတော်မူ၏ဦးခေါင်းကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ဌာနခွဲရုံး။ ၆။ လက်မှတ်များ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အခွန် အာဏာပိုင်နှင့်အခွန်၏တစ်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ(သို့မဟုတ်၎င်းလာ့ဂ္နာတိုင်းပြည်အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ခြင်း)။ စာရွက်စာတမ်းများအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလိုအပ်ိုင္ငံေရးတရားဝင်သို့မဟုတ် နှင့်အတူအတြက္အျဖို့ရုရှားဘာသာစကား။ ပြီးနောက်အနှစ်များကိုအပြည့်အဝအကွာအဝေးစတင်-တက်ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၊၊နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ခံမှုရှိသည်ကိုသဘောပေါက်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်း:တ-အခကြေးငွေ၊အပြည့်အဝ-ဝန္ေဖြည့်ဆည်းဖို့အံဝင်ခွင်၏လိုအပ်ချက်များကိုစဖွင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ ဤစ-အထိသာဝန္ေင္သည္ရှိသမျှကိုဥပဒေကြောင်းအရ၊အခွန်၊စာရင်းကိုင်၊စီဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုအပ်ချက်များအပါအဝင်ရုရှားစျေးကွက်။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်၏သုံးဆင့်စန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အသင့်လိုအပ်သောရှိမရှိ၊သင်စိတ်ကူးမှာအဆင့်သို့မဟုတ်နီးပါးအဆင်သင့်လုပ်စတင်။ အဘယ်ကြောင့်ဝယ်ယူအဝန္ေဆာင္မႈ? ၁။ သင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးထံမှကုမ္ပဏီနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းအောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံ။ အမွတ္ပြေးရှာတွေ့ခြင်းငှါပတ်လည်တကျိပ်ကွဲပြားခြားနားသောအထူးကု၊အဘယ်သူမျှမမျိုးစုံစာချုပ်များ၊အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ ၂။ ရတအဖွဲ့များ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ထိပ်တန်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများအနေဖြင့်ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူများပရော်ဖက်ရှင်နယ်အ -အတူလုပ်ကိုင်ဖို့သင်သင်သည်သင်၏ပန်းတိုင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ၃။ သင်ပိုမိုများအတွက်။ နှင့်အတူကြည့်ရန်စဝန္ေဆာင္မႈအရမော်ရဲ့ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များတစ်ဦးထက်ပိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းစျေးနှုန်းထက်သင်ရနိုင်ဖြင့်စာချုပ်ချုပ်နှင့်အတူအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အတိုင်ပင်ခံ။ ၄။ သင်ရှေ့ဆက်အချိန်သိကုန်ကျမည်ဘယ်လောက်မှစတင်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ဘဲကုန်ကျစရိတ်။ အဘယ်သူမျှမကုန်။ သင်ရွေးချယ်အဆင့်၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူပုံသေစျေးနှုန်း-အရကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံချက်ရလဒ်များ။ ၅။ သင်ရုံသင်ဘာလိုအပ်တယ်။ မူလတန်းအဆင့်ထောက်ခံမှုအများအတွက်မှန်ကြောင်းသင်နဲ့သင့်ကုမ္ပဏီ။ သင်တစ်ခုခုကိုချင်တယ်ဆိုရင်ပို-ကြည့်ရန်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဆောင်မှုအပေါ်အခြေခံ။ ကြည့်ရန်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ပေးကံေ၊ဥပဒေနှင့်စာရင်းကိုင်န်ဆောင်မှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီ။.
ရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးတရားဝင်တရားစွဲဆိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမိုက်ကယ် နှင့်အတူလိမ်လည်အပေါ်ကြာသပတေးနေ့အောက်သူ့ရဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ဖမ်းဆီးခြင်း၊သူ့ရှေ့နေကပြော။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြနှင့်အတူသူ့ကိုအ အပေါ်တာဝန်ခံအကြီးစားလိမ်လည်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အစည်းအုပ်စုအဖြစ်နိုငျသောဒဏ်ကြောင့်အထိ ၁၀ ထောင်ထဲမှာရှိနှစ်ပေါင်း။ 'သူငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဝန်ခံရန်သူ၏အပြစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်သက်သေခံ'စသျဖင့္မိမိအကာကွယ်ရေး၊ရှေ့နေငယ္လည္း ပြောရုရှားသတင်းအေဂျင်စီ။ ၏တည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းဘီလီယံဒေါ်လာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ။ သူသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်ခြောက်ခုကလူအဖမ်း အတွက်သက်ဆိုင်ရာသို့အစွပ်ထိန္၏၂။ ၅ ဘီလီယံရူ($၃၇။ ၇ သန်း)ရုရှားနိုင်ငံ၏။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ၊ငါးအခြားသူများသိမ္းဖြစ်ရပ်အတွက်၊စ ကြာသပတေးနေ့၊ရုရှားမီဒီယာအစီရင်ခံတင်ပြ။ လိုက္သည္တရားရုံးကစွဲချက်သူ့ကိုဆန့်ကျင်နေသောအဖြစ်အသုံးပြုလျှက်တူရိယာတစ်ခုအတွက်ရှယ်ယာအငြင်းဇွတ်ပြုတော်မူပြီဘာမှမမှား။ အများအပြားမြင့်မြင့်ပရိုဖိုင်းကိန်းဂဏန်းများရှိသည်ပြော၏ကိုယ်စား နှင့်အတူ၊ရုရှားနိုင်ငံ၏စီးပွားလက္ဆုိင္ရာဘော ဟုအမှုပုံမှန်ကော်ပိုရိတ်အငြင်းပွားနှင့်တောင်းဆိုသူ၏တရားမဝင်ဖမ်းဆီး။ ဒါပေမယ့်ကရင်မလယ္မငယ္လည္း ကြာသပတေးနေ့ကပြောပါတယ်:'ကျွန်တော်တို့မှာသံသယမရှိကြောင်းအမှန်တရားနိုင်ပါလိမ့်မယ်၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်။ ဘယ်သူမှပေမယ့်တရားရုံးကအနိုင်အရိုက္ခံမိုက်ကယ် အပြစ်မဲ့၊'ဟုသူကပြောသည်။ စကားပြောမှာတစ်ဖိုရမ်တစ်ခုနှင့်အတူအထူးရှင်များအတွက်မော်စကို၊ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟုတ္ဘဲသူ'မဆုံမစ္စတာ 'ဒါပေမယ့်သမီးကြီး'၏ဗဟိုမှာမဟုတ်ဘဲသွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ။ ငါကြားလျှင်အဘယ်သို့ လေးစားသူ(က)၊ငါထင်ကြောင်းများစွာကိုအခြားသူများအကြားလွန်းသောကြောင့်၊'သူကဆက်ပြောသည်။ အမေရိကန်သံရုံးတွင်မော်စကိုေတြ့ခဲ့မင့္ျခွင့်ပြုချက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် ၊ဟုရုရှားခဲ့တရားဝင်တာဝန်ရှိအဲဒီလိုလုပ်ဖို့။ 'ရုရှားရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများအောက်စ္ႏ္ဗင်းအပ်သည်များကို္လက်လှမ်းအတွင်းလေးနေ့ရက်ကာလအ'အသံရုံးတွင်ပြောကြားတစ်ဦးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်။ ခဲ့မိန့်တွင်ကျင်းပကိဳ-ရုံးတင်စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းရေးအားဖြင့်ရုံးငါးရက်အကြာ၊ပြီးပြီးနောက်တစျနေ့ကသိမ္း။ မိမိအနေစဉ်အတွင်းနှစ်စဉ်ပြည်နယ်အရမ္းလိပ်စာအပေါ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ခေါ်များအတွက်နည်းပါးလာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုဆန့်ကျင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။
မိသားစုအငြင်းပွားမှုများအလွန်ကျယ်ပြန့်အတွက်အရပ်ဘက်ဥပဒေ။ သူတို့ကအစဉ်အမြဲချိတ်ဆက်သာနှင့်အတူပြဿနာများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေး။ အများစုဟာမိသားစုကအငြင်းပွားမှုများရှိသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဘဏ္ဍာရေးနောက်ခံ။ မကြာခဏထိုသို့အခြေချရန်သူတို့ကိုအကူအညီမပါဘဲ၏ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း။ ရှိပါတယ်လျှင်ပဋိပက္ခများမရနိုငျသောအားဖြင့်အခြေချခြားနည်းလမ်းများရှိလာတဲ့လိုအပ်ရန်တရားရုံး။ သင်အကူအညီနှင့်အတူဖြေရှင်းမိသားစုပြဿနာများ? အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့များ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေများ၏အကူအညီ"-မစစ္ေကံေ"များသည်တိုင်ပင်ခံများနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှု။ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၏အကူအညီမိမိတို့အကျင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ' ပြဿနာများ။ နိုင်ပါတယ်အတွက်လိုအပ်သောအချို့အခြားကိစ္စရပ်များ။ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ"တစ်ဦး-မစစ္ေကံေ"ပေးမည်ဟုသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အရည်အချင်းအကူအညီမည်သို့ပင်ရဲ့ရှုပ်ထွေးမှု။ ရှိသည်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်လုပ်ကိုင်အတွေ့အကြုံအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဥပဒေ။ တစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်မှုလျှောက်ထားသည်အတိုင်းလိုင်း၏အကူအညီ။ အသီးအသီးအထူးသဖြင့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ခြင်းပေးရမည်၊၎င်းနောက်တချို့မျိုးကွဲများ၏၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ကြ၏လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါထောက်ခံအကူအမြဲပြုမူဆောင်ရွက်ကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်'အကျိုးစီးပွား။ ကံမကောင်းစွာပဲရှိနေပါသည်တစ်ဦးမှိုင်းသောမိသားစုအငြင်းပွားမှုများနှင့်ထို့အပြင်ဟာသူတို့ရဲ့အခြေချအလွန်ရှုပ်ထွေးသည်၊အာရုံကြော၊စျေးကြီးနှင့်အစ္စ။ ဒီအခြေအနေကလူအတော်များများဟာအရှုံးမပေးအခြေအနေ၊မအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေ၎င်းတို့၏အခွင့်နှင့်စဉ်းစားမိလိုက်ကြောင်းသူတို့မကာကွယ်။ သို့သော်တကယ်တော့အဖြစ်သူတို့သည်တင်းကြပ်စွာသတ်မှတ်ထားသောအားဖြင့်ဥပဒေနှင့်ယဉ်ကျေးတဲ့အခြေချ၏အငြင်းပွားမှုတွင်တရားရုံးကအနိုင်အကူအညီကာကွယ်ရန်သကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖြစ်အိမ်ခြံမြေအကျိုးစီးပွား။ တဲ့ မိသားစုရှေ့နေကူညီနိုင်မှရှောင်ရှားရန်စုစုပေါင်းအမှားအယွင်း၊ ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ဥပဒေကြောင်းအကျိုးလျှင်မည်သည့်အငြင်း။ အထူးကုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုပြဿနာထဲမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံထုံးစံ။ မည်သို့ပင်၌အရှေ့နေများ"အမစစ္ေကံေ"သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသာအားဖြင့်သူတို့၏နက်ရှိုင်းသောအသိပညာ၊အတွေ့အကြုံ၊ဒါပေမယ့်လည်းလက်ရှိရုရှားမှာတရားကျင့်။ ဒီခွင့်ပြုသာအလိုင်းရဲ့စွန့်စားမှု၊ဒါပေမယ့်လည်းကိုခုခံကာကွယ်ဖို့မိမိအကျိုးစီးပွား။ ဖြာမိသားစုအငြင်းပွားမှုများကိုထောက်ခံခန့်မှန်းအခြေအနေကိုဝေ။ မရှိဖို့အမြဲအသုံးဝင်နပါတယ္။ အရည်အချင်းဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီမကြာခဏခွင့်ပြုဖို့အခြေချမိသားစုပဋိပက္ခအားဖြင့်။ အနှစ်ရှည်၏အတွေ့အကြုံ"က-မစစ္ေကံေ"အတွက်သင့်လျော်သောဥပဒေလယ်ပြင်သက်သေအထောက်အထားကိုနယ္စပ္မွာတွဲကတစ်ဦးကိုကျပန်းနည်းလမ်းနှင့်ယင်းအစားတစ်ခုချွင်းချက်ထက်။ သို့သော်အများဆုံးမိသားစုပဋိပက္ခနိုင်မည်အားဖြင့်အခြေချရီးအားဖြင့်သဘောတူပါတီ။
ရုရှားနှစ်ရာရှိ နှင့် က်င္းထောင်ထဲအပေါ် စွဲချက်-ဘောလုံးသတင်း-အားကစား
အနှစ်ရုရှားစာမ်ားခဲ့ကြသိမ္းေနပြီးနောက်ဗီဒီယိုထွက်လာဖြင့်အမျိုးသားတိုက်ခိုက်နှစ်ရာရှိနှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကုန္ခ်င္မွမော်ဖီး။ တဦးတည်း၏အရာရှိကြီးနှင့်အတူထိကုနေစဉ်အစား-သူ့ရှေ့နေခိုင်သူကအပြင်း။ သီးခြားအတွက်ဖြစ်ရပ်သမားကိုယာဉ်မောင်းတစ်ဦး၏ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ပျက်သူမဒီး။ လက္ရွိပရီးမီးယားလိဂ်ဟုခေါ်သည်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပိတ်ဆို့မှုဆန့်ကျင်ရေးမီတစ်မော်စကိုတရားရုံးအုပ်ချုပ်သောအရံသင့်၌ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလိဂ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဖော်ပြချက်:ဤအပျက်အပျော်အပေါ်အရိပ်သင်းဇင်းနှင့်အသင်း ၊ဒါပေမယ့်အလုံးစုံရုရှားဘောလုံး။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောသူတို့အား အပြစ်သင့်အားသာလျှင်အများဆုံးပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ရာမရှိသည်များအတွက်ဘောလုံးလောက ! ကျနော်တို့အယူခံလိမ့်မည်ဟုဒီဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်ယုံကြည်အဖြစ် နှင့်တရားမများရှင်းလင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံ၊သူ။ နှစ်ဦးစလုံး နှင့် ကိုယ်စားပြုခဲ့ကြမိမိတို့တိုင်းပြည်နှင့်အတူ၊၆၃ ရုရှားထုပ်သူတို့ကိုအကြား။ အတွက်အမည်ရှိရုရှားရဲ့ပဏာမအသင်းများအတွက်ဒီနွေရာသီမှာရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကြီးဆုတ်ခွာဖို့အတင်းအဓမ္မအမှုကြောင့်ဒဏ်ရာ။ ရဲ့နောက်ဆုံးအသွင်အပြင်နိုင်ငံတကာရောက်စဉ်အတွင်းယူရို ၂၀၁၆။
ရုရှားဥပဒေကြောင်းအဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ရုရှားဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူရုံးတွင်မော်နှင့်ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ ရုရှားမှာ ။ ဒါဟာအတွက်ဖွဲ့စည်း ၁၉၉၉။ ယနေ့တွင်၊ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရအဖွဲ့စည်းများ၏မြင့်မားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေများအရည်အချင်းလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဥပဒေရုရှားနိုင်ငံ။ ကျနော်တို့ကအဖြစ်လူသိများကြသည်တစ်ဦးအပြိုင်အခကြေးငွေဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်တစ်ဦးအလတ်စားဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာအဓိကနယ်ပယ်ရုရှားဥပဒေအပါအဝင်၊ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊စာချုပ်ဥပဒေ၊အိမ်ခြံမြေနှင့်မြေဥပဒေ၊အလုပ်သမားဥပဒေ၊ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဆောင်းပါးများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ရုံးသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးတို့တွင်နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်ရုရှား၊ကျော်နှင့်အတူ ၁၁၀ ရှေ့နေများထမ်းဆောင်တစ်ဦးအထင်ကြီး၏တန်းစီဇယားကြီးများ၊ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံစုံ။ ကျနော်တို့များကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုတစ်ခုအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးယံ၏န်ဆောင်မှုများ၊အထူးဒေသများရှိအငြင်းပွား။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ရုံးတံတားဤဏာန္း၊ရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထူးခြားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဟူ၍ဆယ်စုနှစ်များအပေါ်-မြေပြင်အတွေ့အကြုံအတွက်ဤဒေသအတူရှုထောင့်မှမြောက်မြားစွာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုပြီးမှဦးဆောင်ကြီးစားစီမံကိန်း။ အဆိုပါရှေ့နေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုရှားနိုင်ငံ အလေ့အကျင့်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ရဲ့မော်ရုံးပါဝင်ရုရှား၊။။ မာ-အရည်အချင်းပြည့်သူအရှေ့နေအလုပ်နဲ့အနီးကပ် ရဲ့ရှေ့နေများအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ဥရောပတိုက်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အာရှတွင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နှင့်နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကိုလက်တွေ့ကျတဲ့၊စီးပြားေရးအတြက္ဦး။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရုရှားရှေ့နေအွန်လိုင်းကဦးဆောင်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက် တွက်ရုံးခန်းများနှင့်အတူ၊ရုရှားနိုင်ငံ၊ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ဘီလာရုစ်နှင့်ဆက်စပ်ရုံး၌ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ။ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ပြီး ၁၉၉၃၊နှင့်ကုမ္ပဏီထောက်ပံ့အပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊အစိုးရမဟုတ်သောသည္။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးကျယ်ပြန့်ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက်ကနေဒါ။ အတူရုံးတွင်ရှစ်ကနေဒါစင္တာမ်ားနဲ့မော်နှင့်လန်ဒန်၊ဒါကြောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးအပြည့်အဝအဖြည့်၏ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာ။ အသုံးမပြု။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီရဲ့ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အမှု၌နယူးယောက်မှာ ၁၉၀၁၊ရှေ့နေများသာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊လက်တင်အမေရိက၊ဥရောပ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊အာဖရိကနှင့်အာရှရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များမှာအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အစိုးရနှင့်ပြည်နယ်ပိုင်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ပါဝင်ပတ်သက်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် ။ ။ ။ သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောလေ့ကျင့်ပါးအားလုံးဒေသများတွင်ပြည်တွင်းဥပဒေနှင့်အချို့သောဒေသများရှိအဖြူကော်လာရာဇဝတ်မှုဥပဒေကို။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်န့ 'ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်ရုရှားနှင့်အထူးစာမျက်နှာများ၏လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများမှနောက်ကျောကွာဟ ၁၉၇၀ အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီအကြံပေးအဓိကစွမ်းအင်လိုင်းပေါ်ကြီးမားတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းအတွက်ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ မုန့်ဖုတ် ဖွင့်လှစ်မော်ရုံး ၁၉၉၃ ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြီးထွားလာသည်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရေးသား သည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူထက်ပိုပြီး ၉၀၀ ရှေ့နေများထဲတွင် ၁၄ ရုံးအတွက်ဘေဂျင်း၊သုိလ္ေ၊ချီကာဂို၊အီဗာ၊ေဟာင္ေကာင္၊လန်ဒန်၊လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊မော်စကို၊နယူးယောက်၊၊ပဲရစ်မြို့၊ဆန်ဖ၊ရှန်ဟိုင်း၊ ဝါရှင်တန်၊။ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတာဝန်ထမ်းဆောင်လိုအပ်ချက်များကို။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ် နှင့် သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက် ။။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယုံကြည်ကြောင်းကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပိုင်ကုမ္ပဏီစိတ်အားထက်သန်ယှဉ်ပြိုင်ရန်၊အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖို့စိတ်အားထက်သန်နားထောငျနှင့်လေ့လာသင်ယူ၊နှင့်ဖြေရှင်းဖို့စိန်ခေါ်မှု။ ကျနော်တို့တိုင်းတာသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဥပဒေကြောင်းအရမဟာဗျူဟာကလပ်သည်အထက်တန်းကျကျဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောပေးလိုက်ပြည့်အဝအကွာအဝေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖောက်သည်များ။ အသင်းအပေါ်အလေးပေးထောက်ခံနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုများ၊ဖက်စပ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာနှင့်အကျိုးစီမံကိန်းများအတွက်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏လုပ်ငန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားဝင်ကော်ပိုရေးရှင်း(ကည္)ပုဂ္ဂလိကနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူတည်နေရာအတွက် ။ ဘတ်နှင့်မော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ အဓိကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်ထာင္ေဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်ပြု၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးနှင့်အကိုင်းအခက်များ၏နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊လိုင်စင်၊သိမ်းနှင့်။ အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံနှင့်သုံးခြင်း၊ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ။ အလေ့အကျင့်ဒေသများရံကုမ္ပဏီနှင့်ကုမ္ပဏီခွဲဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးဘဏ်ခွဲများနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ၊ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ၊အထူးဂရုစိုက်ကာ၊ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဝယ်ယူ။ ဥပဒေရုံးအထင်မှတ်တမ်းအတွက်ဆောင်ရွက်အမျိုးမျိုးအမှုပေါင်းမီတရား၊အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး။ ခံစားခ်က္ျချဉ်းကပ်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာအဘို့အသီးအသီးလိုင်း၊ပူဇော်သက္ကာနှင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးကိရိယာများကိုဖြေရှင်းရန်ကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သော အခွင့်အကာအကွယ်၊ကော်ပိုရိတ်။ အလုပျ ။ ၊အဂၤလိပ္စကားေျပာရှေ့နေမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ အကြံဉာဏ်နှင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၊ဥပဒေရေးရာစက္ကူလုပ်ခြင်း၊ကိုယ်စားပြုခြင်း၊တရားရုံးထဲကအငြင်းပွားမှုများ၊ခုံသမာဓိနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်း၊ဆုချီးမြှင့်စိုးမိုးရေး၊ပြစ်မှုဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးဌာန။ အဖွဲ့ဝင်မော်စကိုမြို့ဘားအသင်းမှ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ။ သည့်နိုင်ငံတကာအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီလည်ပတ်မှာ ဒသထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအလွန်မြင့်မားအရည်အချင်းဥပဒေနှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း။ အဖွဲ့ကကိုင်တွယ်အသုံးပြုပုံအပေးအယူအတွက်အမြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊မီတာ ဘဏ္ဍာရေးအ ပုံများ၊ချေး။ အတွက် ၂၀၀၀၊အကြှနျုပျ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ကျွန်မစတင်အ မိတ်ဖက်များဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်ပရာ့ဂ်၊ချက်သမ္မတနိုင်ငံ။ အချိန်ကျော်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကြီးအိုင်-ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးပေါင်းစည်းဒေသဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊အရာပထမဦးဆုံးမှာသလိုပဲမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ သို့သော်၊ပြီးနောက်အနှစ်နှင့်အလုပ်ကြိုးစားမှု၊ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ၊ နှင့်မိတ်ဖက်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီများအတွက်ရုရှားနှင့်နိုင်ငံခြား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်ပွားတရားစွဲဆိုခြင်း၊မိသားစုအငြင်းပွားမှုများ၊အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ၊အမွေဥစ္စာ၊အာမခံ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနိုင်ငံ၊လေကြောင်း၊အိမ်ခြံမြေများ၊နိုင်ငံခြားအိမ်ခြံမြေစတာတွေ။ ၊ သည့်နိုင်ငံတကာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ရှိပြီးမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံအတွက်အထူးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊အိမ်ခြံမြေနှင့်လူဝင္မႈဥပေဒ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ကွဲပြားသောအဖွဲ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူဖောက်သည်ဖြေရှင်းချက်ပေးသည်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏အခြေအနေနှင့်လိုအပ်ချက်များကို။ အဆိုပါရှေ့နေများကိုအခိုင်အမာကတိကဝတ္ျပဳ ။ ဂန်ရွပ္အက်ႌတည္ေရုံးမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ၊၊ကာဇက်စတန်၊၂၀၁၂၊၏အပြင်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေရှေ့နေတွေ၏အထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကစတင်လည်ပတ်မှုအတွက်ဒေသအတွက် ၁၉၉၀။ အဆိုပါရုံးကိုယ်စားပြုဖောက်သည်များအတွက်ဒေသလွှမ်းခြုံအရုရွား၊အ။ မော်စကိုရှေ့နေ၊ရှေ့နေမှာဥပဒေကမ်းလှမ်းချက်ကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်အဆောင်မှုများအများဆုံးမကြာခဏလိုအပ်သောအားဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ တွင်အခြေစိုက်ရုံးတွင်မော်နှင့်လန်ဒန်အဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအဖုံး၏အရေးကိစ္စများနှင့်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဥပဒေအဖြစ်ကိုယ်စားပြု၏။ ၃ အုပ်စုကိုသီးခြားလွတ်လပ်သည့်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၊အရှေ့တောင်ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုမှနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီလည်ပတ်မှုအတွက်ရုရှားက။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကရှေ့နေများစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၈။ လက်ရှိအချိန်မှာအချိန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်ဥပဒေရည်ရွယ်န်ဆောင်မှုကိုကာကွယ်စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားနိုင်ငံခြားစီးပွားအတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ အရှေ့နေများ၏ကုမ္ပဏီရှိသည်။ အတိဝန္ေဆာင္မႈ၊ကျွန်တော်သိသောရုရှားစျေးကွက်လိုအပ်ဆန်းသစ်အတွေးအခေါ်နှင့်ပြောင်းလဲအလေ့အကျင့်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဥပဒေကြောင်းအရသို့မဟုတ်အခွန်အရအကြံဉာဏ်၊ဖျော်ဖြေမှူစာရင်းစစ်သို့မဟုတ်ရရှိရေးအတွက်ယာယီနေအိမ်သို့ပါမစ်သို့မဟုတ်လုပ်ခွင့်ပြုရုရှားအတွက်အဖြစ်အခြားလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊တင်မ်။
အောင်အန္တရာယ်များကိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်၊ကျနော်တို့အကြံပြုသည်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းရုရှားဥပဒေများရှိသည့်မှန်မှန်။ အထွေထွေအလုပ်သမား ကျင်းပနှစ်ခုအမျိုးအစားများစစ်ဆေးရေး:စီစဉ်ထားနှင့် အခ်က္ပါ။ သင်ရှိမရှိထွက်ရှာရန်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက်စာရင်းစစ်ဆေးရေးအချိန်ဇယားကိုအပေါ်အထွေထွေ ရဲ့ရုံးကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဖက်ဒရယ်အဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်သင်၏ဒေသခံအလုပ်သမားစစ်ဆေး။ ကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံေ ဆာင္ရြက္သည္သာဆောင်းပါး ၃၆၀ ရုရှားအလုပ်သမား။ ပေမယ့်တဦးတည်းသာမဟုတ်၊တိုင်ကြားမှဝန်ထမ်းဖြစ်အများဆုံးရေပန်းစားသည်။ ၏အမှု၌စားပွဲကိုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမှူးပေးပို့စစ်ဆေးရန်အလို့ငှာကုမ္ပဏီမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ထိုသို့သောစစ်ဆေး။ အမှုအတွက်အစီစဉ်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ယာဥ္မွတ္ပုံသွားရောက်ကြည့်ရှုကုမ္ပဏီအတွက်လူတစ်ဦးနှင့်လက်ကျော်စစ်ဆေးရေးအမိန့်ဖို့အလုပ်ရှင်'ကိုယ်စားလှယ်အပေါ်သို့ထိုကဲ့သို့သော။ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော်လည်းအလုပ်ရှင်အကြောင်းသူတို့မှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်အ စစ်ဆေး။ ထို့အပြင်၊ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေးစေခြင်းငှါကောက်ပေါ်သို့ချက်ချင်းသတိထားမိ၏အထွေထွေ ရုံး၏။ အလုပ်သမားစည်းမျဉ်းသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးမှန်မှန်အတိတ်နှစ်အနည်းငယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အကြံပြုလို ဆောင်ရွက်ထပ်မံ၏အတည်ပြုလိုက်နာနှင့်အတူအလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်အခြားစည်းမျဉ်းများပါဝင်သောအလုပ်သမား။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဤစာရွက်စာတမ်းများအတွက်နှင့်အတူလိုက်နာသက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်သူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြနှင့်အညီလက်ရှိစည်းမျဉ်းလိုအပ်ခဲ့လျှင်။ အမှုအတွက်အစီစဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ကုမ္ပဏီရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တိအကျဘာကိုထွက်ပါမည်။ တစ်ဦးကအန္တရာယ်-အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုအခုတော့လျှောက်ထားသည့်အခါဆောင်ရွက်စစ်ဆေးခြင်း။ အချို့အန္တရာယ်အမျိုးအစားဖို့တာဝန်ကုမ္ပဏီများ"အပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ခုညွှန်ပြချက်၏အလားအလာထိခိုက်မှုအလုပ်သမားတန်ဖိုးဖြင့်(အသက်တာနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏၊အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဝန်ထမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ်-ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းငွေပေးချေမှု၏လုပ်ခလစာနှင့်အခြားငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းအောက်ကိုင်ဆက်ဆံရေး)"ပြင်ဆင်ခဲ့သည် ၁၃၂မျိုး၏အစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း။
ထိုသူအချို့ရေးသားပြုစုခဲ့ကြစစ်ဆေးနှင့်အတူလိုက်နာမှုအထွေထွေမဖြစ်မနေလုပ်လိုအပ်ချက်များကို။ ထိုကဲ့သို့သောရှိပါသလားလျှောက်ထားဖို့အားလုံးကိုကုမ္ပဏီ။ ဥပမာအထွေထွေရှိပါသလား:ကျန်ရှိသောကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြပြင်ဆင်စစ်ဆေးရန်လိုက်နာမှုနှင့်အတူကျန်းမာရေး နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီးအမျိုးအစား။ ထိုကဲ့သို့သောရှိပါသလားရန်လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီများတွေ့ဆုံခြို့သောတိကျတဲ့သတ်မှတ်ချက်များ။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှထွက်ရှာရန်အရှိပါသလားသက်ဆိုင်ရာမှသင့်ကုမ္ပဏီကိုအသုံးပြုဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်လူသိများလက်ထရောနစ်စစ်ဆေး။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်ဤရှိပါသလားဘို့ပြင်ဆင်ထားရန်စီစဉ်ထားလုပ်သမားစစ်ဆေးခြင်းများနှင့်ရှိမရှိစစ်ဆေးအပေါင်းတို့မေးခွန်းများကိုဖြေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကုမ္ပဏီများမကြာခဏမေ့သောအချက်လိုအပ်ခဲ့ကတည်းကပေးဆောင်ဖို့ ၂၀၁၇ လစာ ၂ ဟိုတစ်လလျှင်။ ဤနည်းဥပဒေလည်းသက်ဆိုင်သာ ၄၀ ကိုင့္အဒါပေမယ့်လည်းအပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုများအတွက်အချိန်ညဥ့်အဆိုင်းအလုပ်အတွက်အန္တရာယ်အခြေအနေ၊စသည်တို့ကို။ အသုံးပြုခြင်း၏သဘောတရားများ"ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု"နှင့်"ဥပဒေ"ကိုချိုးသည်အလုပ်သမား။ ဥပဒေအရလိုအပ်ရအားလပ်ရက်အချိန်ဇယားအတည်ပြုအဘယ်သူမျှအကြာတွင်ထက်နှစ်ပတ်အတွင်းကြိုတင်အစအဦး၏အကၡဒိန္။ ပိတ်ဆို့မှုအချိုး:အသတိပေးသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေကနေပွတ် ၁၊၀၀၀ ရန်ပွတ် ၅၊၀၀၀ အဘို့အကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာနှင့်ပွတ်တိုက်မှ ၃၀၊၀၀၀ ရန် ၅၀၊၀၀၀ေ ကုမ္ပဏီ။ ထိုေများမှာတစ်ခါတစ်ရံအပေါ်ချမှတ်အလုပ်ရှင်များအတွက်ပျက်ကွက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတို့၏န်ထမ်းနှင့်အတူအားလပ်ရက်အချိန်ဇယား။ သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒဏ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောချိုးဖောက်ခြင်း၊သဘောမတူဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောချဉ်းကပ်မှုအမှန်မမှန်အဖြစ်အားလပ်ရက်အချိန်ဇယားကိုမဖြစ်ပြည်တွင်းရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ သို့သော်မှရှောင်ရှားရန်၊အငြင်းပွားနှင့်အတူအလုပ်သမားဏာပိုင်များ၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်ကိုအားလပ်ရက်အချိန်ဇယားအလုပ္သ'အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးဂီး။ပိတ်ဆို့မှုအချိုး:အသတိပေးသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေကနေပွတ်.
၁၊၀၀၀ ရန်ပွတ် ၅၊၀၀၀ အဘို့အကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာနှင့်ပွတ်တိုက်မှ ၃၀၊၀၀၀ ရန် ၅၀၊၀၀၀ ကုမ္ပဏီများအတွက်။ ဥပဒေအရလိုအပ်ဆပ်ဖို့အားလပ်ရက်မှာအနည်းဆုံး ၃ ရက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကိုအားလပ်ရက်။ လျှင်အလုပ်ရှင်များဆပ်ဖို့ပျက်ကွက်အားလပ်ရက်အားဖြင့်အမှုကြောင့်နေ့စွဲ၊အလုပ်သမားသည္မြင်ထိုကဲ့သို့သောရှုံးနိမ့်အဖြစ်တစ်ဦးကိုချိုးဖောက်။ ဝန်ထမ်းမကြာခဏတင်ပြသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်လျှောက်လွှာနောက်ကျတော့အလုပ်ရှင်ပေးဆောင်နိုင်။ ရှိပါတယ်ကတည်းကအဘယ်သူမျှမစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အလုပ်သမားဥပဒေများကိုသတ်မှတ်သည့်အခါသင့်ရဲ့န်ထမ်းသူတို့ရဲ့တင်ပြကေးရှင်းအားလပ်ရက်၊ကျွန်တော်အကြံပြုပါသည်ဆွဲတက်ပြည်တွင်းရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်သွင်းခဲ့တဲ့၏အားလပ်ရက်အသုံးချပေး၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင့်ရဲ့န်ထမ်းတင်ပြသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်လျှောက်လွှာမှာအနည်းဆုံး ၂ ပတ်အတွင်းကြိုတင်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်စတင်။ ဒီဘက်ပါ၊အဆိုပါစာရင်းကိုင်ဌာနစီမံခန့်ခွဲကြလိမ့်မည်ငွေပေးချေမှုအောင်ဖို့အတွက်အမှုကြောင့်။ အခါအလုပ္သမားမ်ားေတာင္းလပ်ရက်သိပ်နောက်ကျခြင်း၊တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှရှောင်ရှားရန်ချိုးဖောက်သည်ရန်တောင်းဆိုမှုထမ်းဖို့ သူတို့ရဲ့လျှောက်လွှာအကြာတွင်ကြောင်းဒါကြောင့်ငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်အချိန်အတိုင်းပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်။ အဘို့အကောင်းအလုပ်ရှင်များအတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်ငွေပေးချေမှု၏အားလပ်ရက်နှင့်အခြားမည်သည့်ငွေပေးချေမှုဆိုရင်တော့အောက်မှာကိုင်ဆက်ဆံရေးကနေပွတ် ၃၀၊၀၀၀ ရန် ၅၀၊၀၀၀။ ထမ်းသွားရမယ်အားလပ်ရက်အပေါ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ပါကအားလပ်ရက်အပေါ်သွားစေခြင်းငှါဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ၏သင်တန်းအတွက်အလုပ်အဖွဲ့အစည်း၊ထိုအခါအားလပ်ရက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဆိုင်းနှင့်အတူဝန်ထမ်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှလာမည့်နှစ်တွင်။ ပါကအားလပ်ရက်ဟာဆိုင်းနောက်အနှစ်အားဖြင့်သဘောတူပါတီများ၊န်ထမ်းတက်အသုံးပြုရမည်သူတို့အားလပ်ရက်အတွင်း ၁၂ လ၏အဆုံးအဖွဲ့နှစ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပါက အလုပ်ရှင်များမပေးပါဘူးနှစ်စဉ်ပေးဆောင်ထားခဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဆက်တိုက်အဘို့၊ထို့နောက်တစ်ဦးဒဏ်ငွေကနေပွတ် ၁၊၀၀၀ ရန်ပွတ် ၅၊၀၀၀ နိုင်မည်အပေါ်ချမှတ်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၊နှင့်ဒဏ်ငွေကနေပွတ် ၃၀၊၀၀၀ ရန် ၅၀၊၀၀၀ အပေါ်ကုမ္ပဏီ။ အသုံးချိုးဖောက်သည့်အခါအလုပ်ရှင်များကိုသာမိမိတို့ပြည်တွင်းရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသောထမ်းများကိုတချို့စာရွက်စာတမ်းများအပေါ်သို့ခေါ်မနေသောအားဖြင့်ထောက်ပံ့အလုပ်သမားကုဒ်(ဥပမာ၊အင်း၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေခွန်ဖော်ပြချက်တွင်များအတွက်ယခင်အလုပ်ခွင်၊လစာကြေညာချက်အတွက်လက်ရှိနှစ်နှင့်ယခင်နှစ်ပေါင်း)။ ပိတ်ဆို့မှုအချိုး:အသတိပေးသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေကနေပွတ် ၁၊၀၀၀ ရန်ပွတ် ၅၊၀၀၀ အဘို့အကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာနှင့်ပွတ်တိုက်မှ ၃၀၊၀၀၀ ရန် ၅၀၊၀၀၀ ကုမ္ပဏီများအတွက်။ လျှင်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပယ်မတင်ပြသောစာရွက်စာတမ်းများ၏မထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်အလုပ်သမားများကို၊ထိုကဲ့သို့သောပယ်စေခြင်းငှါ၊ယူဆကမ်း၊နှင့်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်၊အကောင်းကနေပွတ် ၁၊၀၀၀ ရန်ပွတ် ၅၊၀၀၀ ချမှတ်ထားစေခြင်းငှါအပေါ်ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၊နှင့်ဒဏ်ငွေကနေပွတ် ၃၀၊၀၀၀ ရန် ၅၀၊၀၀၀ အပေါ်ကုမ္ပဏီ။ ကျနော်တို့မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးနှင့်ဝေမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံများ၏ထောက်ခံမှုအတွက်အလုပ်သမားစစ်ဆေးကုမ္ပဏီများ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပြန်လည်သုံးသပ်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်လိုက်နာသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့နှင့်အညီလက်ရှိစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်ပင်ပြင်ဆင်နေပျောက်ဆုံးနေသောစာရွက်စာတမ်းများသင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။.
လက်လွတ်မမူပါအခွင့်အရောင်းဖို့သင်၏စီမံကိန်းအပေါ်ဧပြီလ ၄-၂၁' '။ ဘယ်လောက်ထွက်ရှာ။:ရှာတွေ့ခံေျမေရာင္းရုရှားနိုင်ငံ။ ကျနော်တို့ ၃၁ ကမ်းလှမ်းမှုမှ ၁၅၂၊၅၆၄၃၊၁၀၆၊၂၃၈$။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးနှုန်းများလာဖြောင့်မှမိုလ်၊အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအေဂျင်စီ။ ဝယ်ရောင်းအိမ်ခြံမြေရုရှားမှာလုပ်ရတဲ့မပါဘဲအ။ ရခြံမြေအကြံဉာဏ်တွေ၊နောက်ဆုံးပေါ်အိမ်ခြံမြေသတင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ချက်။ သည့်နိုင်ငံတကာအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အတွက်အထူးပြုကူညီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များဝယ်၊ရောင်းနှင့်အငှားဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းအောက်ဆုံးအဆင်သင့်အခြေအနေ။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်ပီးရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်အရှိဆုံးဆည်းအိမ္ျ။ ရှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာရုရှားရှာဖွေဖို့သင်၏အိပ်မက်။
ရုရှားမှာလူငယ်မိသားစုများနှင့်ခွဲဝေချထားပေးရန်လိမ့်မည် ၄။ ၂ ဘီလီယံရူဝယ်ယူရေးအတွက်အိမ္ရာ-ရုရှားသတင်းယနေ့
အစိုးရ၏ရုရွားသာ ၂၀၁၇ ညွှန်ကြားလိမ့်မည်ပေါ်ငွေပေးချေမှုမှလူငယ်မိသားစုများမှဝယ်ယူလမ္း ၄။ ၂ ဘီလီယံရူ၊အဆိုအပေါ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားရုရှားအစိုးရ။"ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအပေါ်"ဖက်ဒရယ်ဘတ်ဂျက်အတွက် ၂၀၁၇ နှင့်စီမံကိန္းကာလ၏၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉"၂၀၁၇ အတွက်အဲဒီရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေပမာဏအတွက် ၄၊၂၃၄ ဘီရူ"၊ ဖော်ပြထားသည့်ထိုသူတို့အတွက်။ ထောက်ပံ့ကြေးအနေဖြင့်ဖက်ဒရယ်ဘတ်ဂျက်မှဘတ်ဂျက်၏င်ဖို့လုပ်လိမ့်မည်္-ဘဏ္ဍာရေးကတိကဝတ်သူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်အပြဋ္ဌာန်းချက်၏လူမှုငွေပေးချေမှုမှလူငယ်စုမ်ားဝယ်ယူရေးအတွက်(င)အိမ္ရာအောက်"အိမ္ရာလူငယ်များသည်မိသားစုများ"အဖက်ဒရယ်ပစ်မှတ်အစီအစဉ်"အိမ္ရာ"အနှစ် ၂၀၁၅-၂၀၂၀၊ကဆက်ပြောသည်မည္။
အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဆက်ကပ်အပ်နှံနှင့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုရုရှားစီးပွားသင်တန်းများကိုပို့ဆောင်မည်၏စင်မြယုံကြည်စိတ်ချစကားပြောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရုရှားအတွက်ရက်သတ္တပတ်! ကန့်သတ်အရေအတွက်၏စကားနှင့်ဖော်ပြချက်များသောအားဖြင့်လုံလောက်တဲ့အတွက်ကျဉ်းမြောင်းဘာသာစကားအသုံးပြုမှုကဲ့သို့ဘဏ္ဍာရေး၊စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊အရောင်း၊စျေးကွက်ရှာဖွေရေး-အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်အဖြစ်"စီးပွားရေးလုပ်ငန်း"။ သင်သည်မကျင့်ခံရဖို့လိုအပ်တယ်လို့။ နှင့်အတူစတင်လာပြီ၊လိုအပ်သောဝေါဟာရသည်ပင်လွယ်ကူဒီအတွက်၊ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောကြောင့်အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ဝေါဟာရမှလာအဂၤလိပ္ဘာ။ ပဲနှိုင်းယှဉ်:စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊စာချုပ်၊ငှားရမ်းပြီးတော့။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝေါဟာရသည်ခက်ခဲသည်မဟုတ်များအတွက်နားလည်ပေမယ့်နေဆဲကြောင့်လိုအပ်သည်သင်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အချိန်အနည်းငယ်။ ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်သင့်ရဲ့အချိန်၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်သာပါဝင်ရေးအချက်အလက်သို့ငါတို့သင်တန်းများ။ သူတို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်အကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်စီးပွားရေးနှင့် သင္ၾရုရှားမှနောက်ကမ္ဘာလွှမ်းနေသည်နှင့်အတူကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ထိုအ နိုင်ငံများအခြားတစ်ဖက်တွင်အတော်လေး ။ လူများ၏ရာခိုင်နှုန်းအဂၤလိပ္စကားေျအတွက်ယခင်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံများတွင်အနှုန်းမှ"အနိမ့်"ကို"အလွန်နိမ့်အားဖြင့်"လွယ္တစ္ဦးဓါန္မွ။ ပြုပါနိုင်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအချိန်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါသည်၊နှင့်သော်လည်းအသံအဖြစ်တစ်ဦး အချိန်ဟာတကယ်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရင်းအမြစ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နှင့်ဤပူဇော်။ ရုံစူးစိုက်အပေါ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်။ သင်ခံစားရလျှင်သင့်သဒ္ဒါကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်သည်အပိုဆောင်းအလုပ်၊ကျွန်တော်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးသဒ္ဒါသင်တန်းအပေါ်အခြေခံပြီးစစ်မှန်သောအသက်ကိုသင်ရှိသည်ချင်တယ်တစ်ဦးထက်ပိုသောလေးနက်၏အသိပညာရုရှ။ လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆက်လက်သင်ယူရုရှားကျွန်တော်ကိုပူဇော်ကြလိမ့်မည်သင်သည်နောက်ဆက်တွဲသင်တန်းများအတွက်လာရန်"အတွက်အတိမ်အနက်"နှင့်မိကျွမ်းကျင်မှုသင်ပြီးသားရှိသည်။
ကိုဘယ်လိုအဦးကပင်ပြီးနောက် ၆ လအတွင်းအလျင်အမြန်
ဒီနေ့ကျနော်တို့ရမယ်ဘယ်လိုထွက်ရှာဖို့ပူးပေါင်းအမွေအပြီး ၆ လနှင့်သာ။ ဤမေးခွန်းအတွက်အနှောက်အများအပြား အလားအလာခေံ။ လျှို့ဝှက်မင့်မည်သူမဆိုသောမျိုးရိုးလိုက်ဖြစ်ပွားချိန်အများကြီးယူ။ နှင့်အောက်မှာအချို့သောအခြေအနေ၊ဆုံးရှုံးနိုင်ပိုင်ခွင့်များလက်ခံရရှိအိမ်ခြံမြေထံမှသေဆုံး။ အဲဒီေနဘဝကိစ္စများဖြစ်သည့်အတွက်ပြန်လည်အမွေအခွင့်ခွင့်ပြု။ ဒါေၾကာင့္အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဟာစကားပြောဆိုရပါမည်။ တကယ်တော့၊ရရှိပိုင်ဆိုင်မှုမှအနှိုးအများအပြားရှိပါတယ်အင်္ဂါနှင့်ရုပ္ရွင္ႏ။ သိသူတို့ကိုအကြောင်း၊ထိုသို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်အတွက်မည်သည့်အခြေအနေရရှိရန်အမွေဥစ္စာအတွက်အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်။ သင်မည်သို့အရွက္ကြဲျ? ပထမဦးဆုံးသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်သက်ဆိုင်။ ဒါကြောင့်ပေါ်လာပါဘူး။ အမှန်အမွေဥစ္စာသည်ကွယ်လွန်သူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများပုံမှန်အားဖြင့်။ သူတို့ပေါ်လာသာ၏အသေခံပြီးနောက်အဆိုပါနှိုး။ ဤအချက်အားတက်၊နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်တစ်ခုတည်းသောအလားအလာခေံ။ လက်ခံရရှိအိမ်ခြံမြေ၏နိုင်ရန်အတွက်အမွေဥစ္စာမှန်သည်၊မတာဝန်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုပြီးစွန့်ပယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊၏မျက်နှာသာအတွက်နောက်ထပ်အလားအလာဆွေမျိုး-သူ။ ဒီ ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ဘယ်လိုမှရသည့်အမွေ? နိုင်ငံသားပေးအပ်ခြောက်လအတွင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဤပြဿနာ။ လောလောဆယ်၊ဒါကြောင့်လိုအပ်သည်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူစာချုပ်စာတမ်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်အိမ်ခြံမြေ၊သို့မဟုတ်အငြင်းဆန်။ အဆုံးတွင်ဤအချိန်ကာလ၏၊ကိစ္စအများစုအတွက်အဆိုပါနိုင်ငံသားအဖြစ်စဉ်းစားဖို့ရှိသည်ကြသောအမွေ။ သူသာပြန်သူ၏အခွင့်အတွက်ခြွင်းချက်အမှုပေါင်း။ ရနှစ်ဝက်အစပြုမှဖြစ်စေယခုအချိန်တွင်၏အဖွင့်အ စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်အသေခံခြင်းနှင့်အတူအဟောင်းပိုင်ရှင်၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု။ မရှိပိုပြီးကြိုဆို။ ဘယ်လိုအရွက္ကြဲျအိမ်တအိမ်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အိမ်ခြံမြေ? နိုင်ငံသားများအတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ရရှိပိုင်ဆိုင်မှုမှအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများ။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌၊သာဆွေမျိုးများသေဆုံး။ အမွေလွှဲပြောင်းအတွက်အစီအစဉ်အတန်း။ အနီးအသွေးဆက်ဆံရေး၊မြတ်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုရယူ။ ကိုရုရှားဥပဒေရှိပါတယ်၊ရှစ်ဆင့်ဆင့်ကိုဦးစားပေးပါ။ ပြီးသူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံးပါဝင်သည်၊အိမ်ထောင်ဖက်၊ကလေးများနှင့်မိဘများက။ ဤနေကြတယ် ခေံဖွစျ၏ပထမအဆင့်သောသူ၊ပညတ်တရားအားဖြင့်လက်ခံရရှိအိမ်ခြံမြေအလွန်ပထမဦးဆုံး။ အခါအမွေအလိုတော်အားဖြင့်၊အမွေခံလည်းမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း။ အဂညြတ္ျဘူးကစားအခန်းကဏ္ဍ။ တကယ်တော့၊အလိမ့်မည်ကိုပြသအလိုတော်များအပင်များ။ မည်သို့မှန်မှန်ကန်ကန်လု? အတူစတင်ရန်၊ငါတို့သည်သင်တို့လိမ့်မည်ကိုစဉ်းစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှေ့တော်၌အသက်တမ်း၏နောက်ဆုံးနေ့။ သူ့အအိမ်ခြံမြေတစ်ဦးအနေဖြင့်ကွယ်လွန်သူဆွေမျိုးတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ်တော့၊အရာအားလုံးထက်လွယ်ကူပုံရတယ်။ အလားတူသမ်၏လုပ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်၏အမှု၌မှားသောတည်၏စည်းကမ်းချက်များ။ ဘယ်လိုဦးကပင်ပြီးနောက် ၆ လပေါင်းများစွာပြီးနောက်အလဲ'အဟောင်း'ပိုင်ရှင်၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု? ဒီလိုလုပ်ဖို့အတော်လေးပြဿနာ။ အထူးသဖြင့်ရှိပါတယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ကောင်းကိုလက်လွတ်ဖို့နောက်ဆုံးရက်။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌၊တစ်ပြည်အတွက်တရားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြန်လည်၎င်း၏အမွေအခြင့္အေ။ ဤသည်အသုံးအများဆုံး။ အဆုံးသတ်မှာ၊ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပေးတဲ့တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်။ အပေါ်၎င်း၏အခြေခံဖြစ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်ခြေအ အမွေဥစ္စာမှတစ်စာချုပ်စာတမ်း။ ဒုတိယအကိစ္စများတွင်၊ဒါကြောင့်လုံလောက်တဲ့နှင့်အတူသဘောတူရန်မွေလက်ခံရရှိသူအ၊အ၏အ၏ဆွေမျိုးကွယ်။ ဒီအခြေအနေ၊ကျနော်တို့အားလုံးကိုသှားဖို့ရှိသည်ယူႏိုင္ပါသည္။ ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌အောင်မြင်ရန်အများသဘောတူသာရိုးကိစ္စရပ်များ၊ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိသောအလွန်အမင်းရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့်၊အများဆုံးမကြာခဏအနယ္စပ္မွာငြင်းခုံနှင့်တအတွက်အလေ့အကျင့်။ ဘယ်လိုဦးကပင်ပြီးနောက် ၆ လပေါင်းများစွာ? ဒါကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်သက်သေပြဖို့အတွက်တရားရုံးရှေ့မှောက်အကြောင်းပြချက်ကောင်းဘို့အသွား။ မဟုတ်ရင်တောင်းဆို၊အမွေဥစ္စာကိုနောက်ခြောက်လအတွင်းအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်အောက်တွင်မည်သည့်အခြေအနေ။ ဤအသုံးအများဆုံးရွေးချယ်စရာ။ ဒါပေမဲ့တခြားသက်အခြေအရံဖြစ်စဉ်းစားသည်ရိုသေလေးစား။ သင်တန်း၏၊ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရမည်ဖြစ်သက်သေပြခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်။ ဘယ်လိုဦးကပင်ပြီးနောက် ၆ လပေါင်းများစွာ? အတွက်ဥပဒေ၏အရုရွားရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအယူအဆအဖြစ်အမှန်တကယ်အမ်ိဳးအခွင့်အရေး၏အမွေဥစ္စာ။ ဒီဘဝအခြေရာအတွက်ပြည်မမှတစ်စာချုပ်စာတမ်းများ၊ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာသူကစတင်ဖို့ သရုပ်ပြအသက်တာ၌အသံုးျပဳသူ၏တည္ေနရာ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်လျှောက်ထားရန်တရားရုံးကအမများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်၏လွဲချော်သတ်မှတ်ပေမယ့်အသိအမှတ်ပြုမှု၏အမှန်တကယ်အမွေဥစ္စာ။ သက်သေအထောက်အထား၏ဤဆောင်ရွက်ရမည်မှပူးတွဲကြေညာချက်များ၏ပြောဆိုချက်ကို။ ဘယ်လိုဦးကပင်ပြီးနောက် ၆ လပေါင်းများစွာ? တစ်ခါနိုင်ငံသားအားလက်ခံတွေ့ဆုံသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်၊သူလျှောက်ထားနိုင်ဖို့တစ်စာချုပ်စာတမ်း။ အမွားမ်ား၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ကဲ့သို့တူညီသော၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းအမွေဥစ္စာ။ သာဖို့မလိုအပ်ပါဘူးရေးသားထားသောသဘောတူအတည်ပြုခြင်းနှင့်စောင့်နောက်ထပ်ခြောက်လအတွင်း။ လည်း၊သင်ဖြစ်လာ ပြီးနောက် ၆ လပေါင်းများစွာ၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တရား။ တစ်ခုခုကိုကူးလက်မှတ်၏အခြားပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပူးတွဲကြေညာချက်အပေါ်၏။ အခုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသားအလုအတွက်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်။ အရာအားလုံးကိုမဟုတ်အဖြစ်ခက်ခဲဖြစ်ဟန်။ အထူးသဖြင့်လျှင်တစ်ဦးအလိုတော်ရှိသည်အရာ၊ဒါကြောင့်ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထား၊အဘယ်သူကိုရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လိုအပ်သည်၏အသေခံပြီးနောက်အဆိုပါအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်။ ရုရှား၌၊ပင်ပြီးနောက်အမွေဥစ္စာများ၊ဆွေမျိုးသားချင်းများမကြာခဏတွေ့ဆုံရန်အတွက်တရားရုံး အပျည်ခြံမြေအဖြစ်သူတို့ထင်မှန်သည်။ အဓိကအရာဖြစ်ပါတယ်သတိရဖို့အနိုင်ငံသားများလွဲချော်သောသူ၏ကာလအတွင်းသုံးစွဲဖို့တစ်စာချုပ်စာတမ်းခြင်းမရှိဘဲကောင်းသောအကြောင်းပြချက်မပြန်လာအမွေအခြင့္အေ။
ဒါပေမယ့်အစားထက်ပယ်'။ ႏွင့္'အတူထိုကဲ့သို့သောဟာရိုးရိုးဝေဖန်ပြောဆိုမှုများစေပြီးစဉ်းစား၏အသီးအသီးမိမိအခြေအလှည့်အတွက်။ မင်းသမီးဗစ်တိုးရီးယား ခဲ့တဲ့ယခင်အိမ်ထောင်။ သူမ၏ပထမဦးဆုံးခင်ပွန်းကြီးကျယ်သောဆင်သုံးပြုခြင်းဂျီ၏ နှင့်အဖဳတ္။ ဒီပထမထောင်ခဲ့စဉ်ကဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယား၊အဘယ်သူသည်အကြီးအဖွားနှစ်ခုစလုံးသတို့သမီးနှင့်သတို့သားနှင့်အတူအဘယ်သူကြည့်ရှုရန်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့နှစ်ကသူမ၏အကြိုက်ဆုံးမရိမြေးလက်ထပ်။ ဖြစ်ပြီထင်ရှားစွာ၌အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊သုံးပြုခြင်းဂျီမဟုတ်ခဲ့သဘာဝကျကျဆီသို့လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊နှင့်ပြည်ထောင်စုအခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်ဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယားမှာသေဆုံး ၁၉၀၁၊အထောင်အနည်းငယ်။ 'ပါက ။ ႏွင့္အဓိပ္ပါယ်ကိုကြောင်းငြင်းခုံ၊အတည္ခ်က္မ်ား၊တန်းတူအို့ဝ်ထောင်ကိုလက်ခံရာဇ်အတည်ပြုသည်မည်သို့ပင်ဆိုစေမရွိတဲ့ အပေါင်ပစ္စည်းဥပဒေတိုက်ခိုက်မှဥပဒေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထက်အခြားအဆက်ခံခြင်းဥပဒေများ၊သူ၏အငြင်းအခုံမထောကျ။ ထိုကဲ့သို့သောအကြံပြုချက်တစ်ခုလျှင်ဝန်ခံ၊မယ်လို့ဆပ်အဆိုပါအရာရှိ၏အမိန့်ဆက်ခံမစမ်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာအနတ္တဖြစ်၏၊ဤသို့မှုန်းကျောင်းအုပ်ကြီး၏ရည်ရွယ်ချက်ပေါလုသည်ငါ၌ ကိုဆက်ခံခြင်းဥပဒေများ:ဟိတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အထောက်အဆက်အရာဇပလ္လင်ကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှဆက်ခံခြင်းဥပဒေများ။ '။ ႏွင့္'စသောခမ်းနားဆင် မကြီး၏ဦးခေါင်းအမင်းဆက်သောကြောင့်မိခင်၏ဒုတိယ၊သူနေထိုင်ခဲ့ရာအတွက်နှင်ဒဏ်အထိ ၁၉၂၈၊ဘဲအသိအမှတ်ပြုရန်အဖြစ်သူ့ကိုထိုကဲ့သို့သော။ အဆိုပါအားနည်းချက်အတွက်ဒီအငြင်းအခုံအကြောင်းဆက်ခံစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်တစ်ခုတည်းကိုသာအားဖြင့်အဆက်ခံခြင်းဥပဒေများ။ အ လီးခဲ့ပိုင္ဆိုင္လေးစား၊ဒါပေမယ့်သူမသတ္စိတ္အပေါ်အမြင်ချင်းဆက်ခံ၍မသက်ဆိုင်ကနေဥပဒေကြောင်းအရအမြင်။ အဖြစ်သူမ၏သား-မှာ-ဥပဒေရေးအတွက်မိမိဂေါ်လ်၊အ လီးခဲ့ ၁၉၂၀ တွင်အကျိုးအမျိုးသမီးသည်အဘယ်သူ၏သားနှစ်ယောက်နှင့်မြေးများအပြားရှိခဲ့ပြီးရက်စက်စွာအသတ်။ စဉ်အတွင်းသူမ၏ ကျန်ပုန်းနှစ်၊သူမခဲ့ရာ၌သူမ၏တန်ခိုးမှမွေးသောထင်ယောင်ထင်မှားသူမ၏သားဒုတိယနှင့်မြေးတြင္ေတွေဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့အသက်ရှင်သေး။ ဖော်ပြထားသည့်အဖြစ်၊အဆက်ခံခြင်းဥပဒေများလိုအပ် စာချုပ်ချုပ်ဖို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတူအိမ်ထောင်ဖက်၏တော်ဝင်မွေးဖွားနိုင်ရန်အတွက်ထုတ်လွှင့်အို့ဝ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှသူတို့သားသမီး။ အဲဒီဥပဒေတွေဟာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲ။ ဆောင်းပါး ၁၈၈ ပြည်ထောင်စုအဖြစ်အောက်ပါအတိုင်း:'ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏နယ်မြေရှိသူလက်ထပ်ထိမ်းမြားကန်ထရိုက်နှင့်အတူလူတစ်ဦး၏အဆင့်အတန်းထားသည်ကိုသူ့အကြောင်းသည်၊မပိုင်ဆိုင်ဖို့တော်ဝင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်အိမ်တော်၊နိုင်လွန်မှပေါ်ကြောင်းလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အစဉ်မြေးဆက်အကြောင်းတည်းပြဿနာကနေထိုကဲ့သို့သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားအခွင့်အရေးပိုင်သောအဖွဲ့ဝင်များ၏အရာဇ်မိသားစု။ '၁၁ ဂုတ် ၁၉၁၁၊ဒုတိယထည့်သွင်းအောက်ပါအကြွင်းဆောင်းပါး ၁၈၈:'မှစမျှကျယ်ဆင်သို့မဟုတ်ပန်းကျုံ့စေခြင်းငှါအတူတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူတစ်ဦးဖစ္ရပ္သည္မွေးဖွားသည်၊မပိုင်ဆိုင်ဖို့တော်ဝင်သို့မဟုတ်အချုပ်အခြာ။ 'ဒါပေမယ့်ဒီ ခဲ့ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး၏အမြိုးသားအအ၏မင်းသားရုရှားနိုင်ငံ နှင့်အ ဇနီးဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ဆောင်းပါး ၁၈၈ ထားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိုကဲ့သို့သောကလေးများမ ။ အ မကြာသေး ပြောဆိုချက်ကိုလည်းအဆင်ပြေလျစ်လျူရှုရေးဆောင်းပါးများ ၃၆ နှင့် ၁၂၆၊အရာပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဆောင်းပါး ၁၂၆ သတ်မှတ်သော'ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံး၏နယ်ချဲ့စစ်သွေးနေသော၏တစ်ထောင်အကြားတစ်ဦးကလူတစ်ဦး၏ပြည်သွေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သက်ဆိုင်ရာမွေးဖွားသောအိမ်ထောင်ရေးအခွင့်အာဏာဖြင့်စိုးရာဇ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့ဝင်များထိုပဒေသရာဇ်၏။ 'ဆောင်းပါး ၃၆ ပြည်ထောင်စုရှင်းအဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းကလေးမွေးထောင်အကြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏နယ်မြေနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သက်ဆိုင်ရာမွေးဖွားသည်၊မပိုင်ဆိုင်ဖို့တော်ဝင်သို့မဟုတ်အင်း၊အိမ်များ၏ဆက်ခံသည်။ 'ပြီးနောက် ၁၉၁၇၊အားလုံးနီးပါး အလွတ်ပြေးသောသူတော်လှန်ရေးကန်ထရိုက် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့။။။။။ ရှုပ်ထွေးမှုများပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ဤရာထူးမမွေးဖွားခဲ့ကြသည့်အတွက်ပြင်သစ်၊ဗြိတိန်၊အမေရိကနဲ့အခြားနိုင်ငံရှိရာအရပ်သားသမီးယူအရိုးသူတို့၏အဘ။ ထို့ကြောင့်၊ဤသူ သားသမီးအရိုး၏ ဝင်အပေါ်သူတို့ရဲ့ကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်အတွက်အဲဒီနိုင်ငံ။ အရှုပ်ထွေးခဲ့ပိုဆိုးတဲ့အခါအဆင် အဖြစ်၊ဦးခေါင်း၏မင်းဆက်၊ဟိုဠ်အများအပြား(သို့သော်အားလုံးမဟုတ်)ဒီသားသမီး ခေါင်းစဉ်နှင့် အမည်များပါဝင်သည်ဟူသောစကားလုံးကို၊မြတ်ညြတ္ျ(အစားထက်အသင်းအတွက်)။
ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းအညွှန်းကိန်းပံ့ပိုးဆူစာရင်းတွင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်ကော်မရှင်များ၊ဌာန၊ဌာနခွဲ။ လျှင်သင်တောင်းခံနေကြသည်တစ်ထပ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အွန်လိုင်း၊သင်သည်လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်များကိုအီးမေးလ်လိပ်စာ။ သင်၌စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ရတဲ့အမှန်၊ဖတ်ချူးပလိုအပ်ချက်များကိုလမ်းညွှန်အဘယျသို့ထွက်ရှာဖို့သင်လိုအပ်။ မလာကြလျှင်အကြောင်းပြုပြီး၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သက်သေပြဖို့သိမ်းအတွက်ရှေ့မှောက်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသွားလျှင်လူတစ်ဦးအတွက်။ ဖတ်ချူးပလိုအပ်ချက်များကိုလမ်းညွှန်အဘယျသို့ထွက်ရှာဖို့သင်လိုအပ်။ သင်အားဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်၊စစ်ဆေးမှုများ၊ပိုက်ဆံအမိန့်၊အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ပြီးငွေထုတ်ကဒ်။ ကတည်းကငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားတည်နေရာကိုစစ်ဆေးဘာလက်ခံဆိုက်မှာသင်လာရောက်လည်ပတ်။ သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမှာထက်လျော့နည်းအတွက်အနှစ်၊သင်သည်သင့်ရဲ့စယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အစားကအစားထိုးပါ။ လို့မရပါကဆက်လက်ကူညီကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာဝက်ဘ်ဆိုက်၊ပူးပေါင်းပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူအၾစမ်းသပ်မှုအသစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဝါရှင်တန်:အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်ပိဳင္ကားအစည်းအဝေးများ'အများပြည်သူသက်သေမီတဲ့ဘာင္ကြက္အပေါ် အင်္ဂါအစုံပွင့်အခြားအလားအလာသိသိသာသာအကြားအပေါ်တတ်နိုင်သမျှဆက်ဆံမှုများအကြားသမ္မတအွန်လိုင်းငွေရှာရဲ့မဲဆွယ်နှင့်ရုရှားစွက်အတွက် ၂၀၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲလူမျိုးရေး။ မစ္စတာအစည်းအဝေးဖွယ်ရှိရင်ဆိုင်ရခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေမှာပွင့်လင်းသောအထက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီကြားနာကျော်သူနဲ့ရုရှားအရာရှိစဉ်အတွင်းမဲဆွယ်နှင့်ဖြစ်စေသူသည်အခန်းကဏ္ဍအတွက်အပစ်ခတ်၏ယခင်မာန္ဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ် ။ အထိကြေညာချက်အပေါ်နင်္လာမှကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရစ်ချတ် ၊ရီပတ်ဘလစ်ကန်ခဲ့ရှိမရှိမသိရသေးဦးမယ်လို့အစည်းအဝေးသက်သေအတွက်ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်။ အစၥအစည်းအဝေးများကြီးမျှော်လင့်ထားဖို့သက်သေသာအပိတ်တံခါးစည်းအဝေး၊အဆိုနှစ်ခုသတင်းရပ်ကွက်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ရှေ့နေချုပ်ရဲ့စဉ်းစား။ သို့သော်သူသည်လက်ဝဲဆုံးဖြတ်ချက်အထိမစ္စတာ ၊အဆိုပါတယ္။ အတရားမျှတမှုဌာနတဦးကပြောသည်မစ္စတာအစည်းအဝေးကိုေတာင္းကိုဖွင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်"သူယုံကြည်သည်အရေးကြီးသည်ကသည်အမေရိကန်လူမျိုးအကြားအမှန်တရားကနေတိုက်ရိုက်သူ့ကို"ဦး ပြောခဲ့အတူတူဘာင္ကြက္ခဲ့သည့်အပတ်ကအကြောင်းမာန္ခဲ့ အချက်အလက်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်တွင်မစ္စတာအစည်းအဝေးမှာရှိသည်မယ်လို့လုပ်"ပြဿနာ"အတွက်ရှေ့နေချုပ်မှဆက်လက်ဦးဆောင်တဲ့ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသို့ရုရှားကြိုးစားကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်သမ္မတရွေး။ မစ္စတာအစည်းအဝေးခဲ့ ကိုယ်တော်တိုင်မှစသောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကမတ်လအတွက်ပြီးနောက်အစီရင်ခံခဲ့နှစ်ခုအတွက်ယခင်ကလုံအစည်းအဝေးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်အတူရုရှားသံအမတ် ။ အင်္ဂါရဲ့သက်သေခံချက်၊စီစဉ်ကိုစတင်မှာ ၂:၃၀ မြန္းလဲြ(၁၈၃၀ ငယ္စဥ္ဘ)၊လိမ့်မည်ဟုပထမဦးဆုံးအဘို့အဦးအစည်းအဝေးများအတွက်ကွန်ကြားခဲ့ရှေ့နေချုပ်။ သူ၏အတွင်းတင်သွင်းကြား၊ဇန်နဝါရီလတွင်ယခင်အမတ်ပြောလွှတ်တော်တရားကာ္မသူမျှအဆက်အသွယ်နှင့်အတူရုရှားအရာရှိအဖြစ်အစိတ်အပိုင်းအအပ်က္အ။ အကာ္မလည်းဖွယ်ရှိကြောင်းသူ့ကိုမေးတဲ့အဖြစ်နိုင်တတိယအလုံအစည်းအဝေးနှင့်အတူဦး ယခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင်။
၏ျပစ္မႈ အင်း။:မ:ရသေ့။ အခန်းကြီး:ရာဇဝတ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်ရုရှားအတွက်၊ထုတ်ဝေသူ:လ်က္။ ရေး:။ ။ ၊။ ။ ၊ -ဆင်းသက်၊။ ။ အရာဇဝတ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးအရှိဆုံးပြည့်စုံသောကိုးကားအဘို့အကျယ်ပြန့်အရေအတွက်ကိုကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှရာဇဝတ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်နှင့်အတူတစ်မူထူးခြားသောအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်း နှင့်နိုင်ငံတကာကဏ္ဍများဤအကြောင်းအရာနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အပေါ်ရာဇဝတ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်။ ပါဝင် ၃၀၀ နီးပါး၊ဒီတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကိုးကားရင်းမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုနေသည်အဆုံးအထိနှင့်ကျယ်ပြန့်-အထိအရင်းအမြစ်အပေါ်ရာဇဝတ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကမ်းလှမ်းင္ငံတကာရှုထောင့်မှနိုင်ငံတကာအဖွဲ့၏ဦးဆောင်ပညာရှင်များအပါအဝင်လွှမ်းခြုံအခိုင်နှင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ် ၌ဥရောပတိုက်၊အာရှတိုက်၊နှင့်အခြားဒေသများကိုအသိအမှတ်ထပ် နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်အတူတစ်အရေအကမ်းကဲ့သို့ဗေဒ၊စိတ်ပညာ၊ဗွီ၊သမိုင်း၊ဘောဂဗေဒ၊နှင့်အများပြည်သူ ကျန်းမာရေး၊ဥပဒေင္ခြသည့်အကြောင်းအရာများမှာ ၁၂ ဓိကထိရောက်သောဒေသများတွင်:အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရှုထောင့်၊အကြောင်း ရှုထောင့်၊ရာဇဝတ်မှုမျိုး၊မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း၊ကြပ်မတ်ခြင်း၊ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှု၊သုတေသနနည်းလမ်းများကို၊ သီအို၊နေပါသည်၏ရာဇဝတ်မှု၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်း(။။)၊၊နှင့်အထူးအတွင်းစနစ်တကျစီစဉ်ရေးသားထားသောပီးဦးဆောင်ပညာရှင်များ၊အဘယ်သူကိုအားလုံးလာကြ၊အဆိုပါစီမံကိန်းနှင့်အတူစံပြလမ်းကြောင်းမှတ်တမ်းများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရပ် ၃ ပံုစံမ်ိဳးရွိပါတယ္။ နားလည်ခေတ်သစ်ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယ်စားပြုနေ၏ဆယ်နှစ်တာသုတေသနနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောမိတ်ဖက်များအကြားအ အကယ်ဒမီ၏ပြည်တွင်းရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်အ ကရုရှားသမ္မတအကယ်ဒမီအမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး။ စာအုပ်အပေးအချိန်မီပြီးနားမလည်စဉ်ကအာဏာပိုင်မှပြောတက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးယန္တရားကစားတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်တာမ်ိဳးေ၊တကယ်တော့၊သူတို့ကြီးမားသောအတိုင်းပြုတ်ကျသားကောင်မှ ။ ယဉ်ကျေးမှုအကျင့်စစျြလြူရှုခဲ့ကြပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန်အခြေအရာအတွက်မသာရဲတပ်ဖွဲ့၊တပ်မတော်၊လုံခြုံရေးအရာရှိများကိုဝန်ဆောင်မှု'အရပ္သား'ရာဇဝတ်ကောင်ဒါပေမယ့်တာမ်ိဳးေ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသူတို့ကိုအတွင်း။ ဤဂိုဏ်းဖို့လေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏တည်နေရာနှင့်ဥပဒေကြောင်းအရလုပ်ပိုင်ခွင့်၊နိုင်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးရာ၏အဘို့အလွဲပြစ်မှုဆိုင်ရာအဆုံးသတ်၊သူတို့ကင္သည္ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်စစ်ဘက်အရာရှိမှာအလွန်အထွတ်၏၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအမိန့်အဆောက်အဦ။ အဲဖြစ်ကြောင်းခိုင်ခိုင်လုံလုံအဘို့အမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းယခုသမ္မတပူတင်ဖို့အစပြုဖြစ်လာသတိပြုမိလက်တွေ့ကျဒီအန္တရာယ်ဖြစ်စေများအတွက်၊ရုရှားအမျိုးသားလုံခြုံရေး၊အနည်းဆုံးအပေးအ ၏လက်နက်မှရာဇဝတ်မှုနှင့်မာ္ဒန္ပန္းလက်၊ဒါပေမဲ့၊အနာဂတ်လုံခြုံရေးယန္တရားရှိနေပေလိမ့်မည်ယွင်းနှင့် ။ ဥရောပပုံမှန်ရဲအတိတ်နှစ် ၇၀ မှအအားနည်းခန္ဓာကိုယ်ရှာကြံသေချာစေရန်အရှင်သန်မှု၏ဗီယက်အုပ်ချုပ်ဖို့အကြီးအကျယ်ယႏၱယွင်းအားဖြင့်နီးပါးအကြွင်းမဲ့အာဏာ။ အဖြစ်ဆိုဗီယက်ဆုိင္းခဲ့ ေအာရုံစူးစိုက်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ၊၎င်း၏အတွေး၊ကျွမ်းကျင်၊နှင့်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးစလုံးအတီနှင့်ထမ်းဆောင်ပြောင်းလဲပြီအားလုံးအတွက်ကာလ၊ဆုိင္းခဲ့သည်နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်များ၊ဒါပေမယ့်လက်ကျန်ထဲမှအသုံးပီးဓါတ္ေပေါ်မူတည်ပြီးအခြေအနေများ၏။ အဆုိင္းတူ၊အမြစ်သည်ပြည်နယ်အတွက်လောလောဆယ်တွင်။ ဒါဟာနေဆဲအသံ၏ပါတီကအရှုံး၎င်း၏တရားဝင်လူဦးရေအကြား။ ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်၏အဖွဲ့အစည်းစပ်သောဥပဒေဖြစ်သည်တစ်ဦးချွန်ထက်သောမှလက်ရှိအလေ့အကျင့်။ ဒါပေမယ့်ပင်လျှင်အဆုိင္းတုံ့ပြန်ရန်ဤအသစ်သောမျှော်လင့်ချက်များကြောင့်အများ၏တောင်းဆိုချက်အရလာဒ္မ်ားကုန်သွယ်မှုတို့တွင်ပြည်နယ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲတပ်ဖွဲ့တည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့သို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်၏ဘဝအသက်တာအ ထက်ဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှာအနောက်တိုင်းဒီမိုကလူ့အဖွဲ့အစည်း။ အဆိုပါစီမံကိန်းအပေါ်အလေးပေး ၃ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများဒီကနေ့လုံလောက်သောကိုယ်စားပြုကြောင်း'အောင်မြင်'အ၊'အောင်မြင်'ဆုံးဖြတ်ချက်၊နှင့်အပို-ဥပေဒေဘာင္အတြင္း။ အသီးအသီးအမှုလေ့လာမှုကိုအားဖြင့်ဖြည့်စွက် တာင္၊ကာကွယ်ရေးရှေ့နေ၊တရားသူကြီး၊ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ။ ကိုမူရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကိုကျော်လွန်သွားသည်ရိုးရိုးတပ်ကိုရုရှားဥပဒေတွင်ကုစားအဖြစ်ထိရောက်မှု'၊အစားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မည်သို့ဤသူတို့သည်ကုစားအစပ်ိင္ငံေရးအစိုးရလိုရုရှားနိုင်ငံ။ အားလုံးရာဇဝတ်မှုရုရှားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်အပြစ်မှုဆိုင်ရာအ ၁၉၉၆။ ၂၀၁၂ မှတ်ပုံတင်ထားသောရာဇဝတ်မှုနှုန်းလူတစ်ဦးနှုန်းခဲ့သည် ၁၊၆၀၈ႏွ၁၀၀၊၀၀၀ ရာ၊ရာထူးကရုရှားအတွက် ၅၀ ရာအခြားနိုင်ငံများအတွက်။ ဦးဆောင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပြစ်မှုများပါဝင်သည်ခိုး၊မူးယစ်ဆက်စပ်ပြစ်မှုများ၊လိမ်လည် ။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောရုရှားရာဇဝတ်မှုနှုန်းထိုးတက်စဉ်ကာလအတွင်းအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ၏ ဒါပေမယ့်စတင်ကျဆင်းပြီးနောက် ၂၀၀၇။ အောက်ပါဒိုင်းနမစ်၏ရာဇဝတ်မှုနှုန်းကိုရုရှားလည်းအတွေ့အကြုံတိုးမြှင့်အရေအတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွင်း ၁၉၉၀-၂၀၀၇။ ပေမယ့်မကြာသေးလျော့တွက်ရာဇဝတ်မှုနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်၊အဆက္မျပြဿနာကြီးထွားလာပြန်လုပ်ပါ၊အမျိုးသမီးနှင့်သားသည်။ ဘောင်၊အရက် မူးယစ်မှုတွေ၊နှင့်မရှိခြင်းရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အလုပ်အကိုင်လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအတွက်ရှင်းပြပစ္မႈရုရှား၌။ နေသော်လည်းနိုင်ငံ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလျော့ချဖို့ ၊၎င်း၏အကျဉ်းထောင်လူဦးရေ၏တို့တွင်ထိပ်ဆုံးဆယ်အတွက်။ ရုရှားကိုလည်းတစ်ခုဖြစ်သည်အဆိုပါထိပ်တန်းသုံးနိုင်ငံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမျိုးသမီးနှင့် ျဖစ္သည္။ သိပ္ပံ၏ရုရှားတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအနီးကပ်ဆက်စပ်ဥပဒေနှင့်ယနေ့အကြွင်းအကျန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခေတ်သစ်ပညာရေးဥပဒေ။ဘာကြောင့်ဒီကရှင်းပြသည်များစွာသော လေ့လာမှုများအအာရုံစူးစိုက်နေကြတယ်ပေါ်တွင်အဓိကပြဋ္ဌာန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု၏ဥပဒေနှင့်တရားရုံးများ၏စာရင်းဇယားပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်း။ သို့သော်၊ရှိကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားအတွက်အသစ်ထည့်သွင်း သီအိုရီနှင့်နည်းလမ်းများ၏ရှုပ်ထွေးအင္းသုတေသနအနာဂတ်အတွက်လေ့လာမှုများအကြားလူငယ်၊ရုရှား ။ ဒီနေ့၊အဲဒီအအုံ အလုပ်ထုတ်ဝေနှစ်စဉ်ရုရှားမှာအများဆုံးထုတ်လုပ်သောပြည်နယ်အားဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသုတေသနစင်တာများနှင့်တက္ကသိုလ်များ။ အနှစ်လူကြိုက်အများဆုံး သည့်အကြောင်းအရာများမှာ ဆက်စပ်သောပြဿနာများ၏ရာဇဝတ်မှုနှင့်အမှုအရေးကိစ္စများကိုဆက်လက်ပြီဘေးရုရှားလူ့အဖွဲ့အစည်းကတည်းကမှားသောအယူရှိ၏။ ဒီစက္ကူစည်းနှစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောကိစ္စများ:အခန်းကဏ္ဍများအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ရုရှားလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအတွင်းလွန်ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်။ ဒီသုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်များတဲ့စီးရီးအတွက်-အနက်အင်တာဗျူးများပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ရေးသားသူအတွက် ၂၀၁၄-၂၀၁၆ နှင့်အတူအဟောင်းနှင့်လက်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများအတွက်အသုံးရုမြို့။ အဆိုပါစက္ကူအခြေအပြောင်းအလဲအတွက်အရိပ်အစည်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ'အမြင်ချင်းတွင်းကာလ:အစောပိုင်းအားဖြင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်း ၁၉၉၀အားဖြင့်နှစ်လယ်ပိုင်း-၂၀၀၀၊နှင့်အလယ်ပိုင်း-၂၀၀၀. မှတဆင့် ၂၀၁၀။ အဆိုပါလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာအကြောင်း၊ကာလအတွင်းအစောပိုင်းကာလ၊ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့ခဲ့ကြ အနေဖြင့်ပြည်နယ်နှင့်ဤအပယ်ခဲ့၏အရင်းအမြစ်အစည်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာအကျပ်အတည်းအတွက်ဥပဒေဘက်တော်သားအရာရှိသောသူကျန်ရစ်၏အလုပ်အပေါ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးနှင့်အတူဒွန်တွဲမြင့်အဆင့်ဆင့်၏အလုပ်ကျေနပ်မှုနှင့်ခြုံငုံခံစားမှု"စွန့်လွှတ်၏"ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအစိုးရက။ တချိန်တည်းမှာ၊အစဉ်ကာလအတွင်းကဤပို့စ်တွင်ကာလအခါ၊အတွေးအစိုးရတစ်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်မှလူ့အဖွဲ့အစည်း၍တခါတရံဖျော်ဖြေမှုတို့တွင်အပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ဝိုင်း၏ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိနှင့်အခြားအစိုးရအရာရှိ။ ထို့အပြင်၊ဤကာလအပီးအဆက္မျသော်လည်း၊မကြာခဏအကြို၊အစည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအမံ။ ဒုတိယကာလ၊ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့ခဲ့ကြဖြည်းဖြည်းချင်းရှိတဲ့ပြန်ပြည်နယ်သို့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ဖြစ်ပေါ်စေသောတိုးမြှင့်အလုပ်ကျေနပ်မှုနှင့်ကောင်းကိုထိန်းထားမှုနှုန်း။ တချိန်တည်းမှာပင်၊ဒုတိယကာလကိုကျဆင်းမှု၏"ရဲတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဝန်ဆောင်မှု"အတွေးအခေါ်နှင့်အဆိုပါတစ်ကျော့၏ တြင္ပူးေ။ ဤအချိန်ကာလအတွင်း၊အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေအတိုင်းဖြစ်လာစနစ်တကျနှင့်ကောင်းဖွဲ့စည်း။ လည်း၊ဒုတိယကာလ၊အဖွဲ့ဝင်များအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာရန်တက်ကြွနေများတောင်းဆိုတွင်အများပြည်သူတာဝန်ခံမှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်ကနေရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ခေတ်သစ်ကာလ၏ရဲတပ်ဖွဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုတင်ဆက်မှုအရာအတွက်အစည်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ၏ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့ခဲ့ရှင်းလင်းစွာဆက်သွယ်ဖို့အစိုးရရဲ့စွမ်းရည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတူဒွန်တွဲတိုးမြှင့် အမြင်ချင်းတို့တွင်ရဲအရာရှိတစ်ဦးပျက်ကွက်၏"ရဲတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ဝန်ဆောင်မှု"။ ထိုကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊အဆိုပါကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြင့်တစ်ကျက်မှုအဖွဲ့အစည်းများဝယ်လိုအားအများပြည်သူအားပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္တာဝန္ယူမႈရဲများမကြာခဏတွေ့အတူအမုန်းနှင့်အမျက်ဒေါသ။ စက္ကူကောက်သောနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းသူတို့ကစားအတွင်းခေတ်မီရုရှားပြည်နယ်။ စက္ကူစည်းများ၏ပြဿနာအကျယ်ပြန့် ၏ပြစ်မှုများအတွက် ဒေသရုရှား၏။ အချက်အများပြည်သူများစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူရဲတပ်ဖွဲ့၊ကြိုတင်လေ့လာရဲတပ်ဖွဲ့တို့၊အမျိုးအစားရာဇဝတ်မှုများ၊နှင့်သားကောင်ရဲ့ကမ္ဘာ့အမွေအသုံးပြုကြသည်ရှင်းပြဖို့တစ်သားကောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အခွေပြစ်မှုများကိုရဲ။ အဆိုပါသုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီးနမူနာရုရှားနိုင်ငံသားများပြုလုပ်ကျော် ၉ နှစ်တာကာလ အ (၁၉၉၈-၂၀၀၇)နှင့်အတူနမူနာအရွယ်မှာ ၁၃၃၂။ အဆိုပါလေ့လာမှုကကောက်ချက်ချကြိုတင်လေ့လာရဲတပ်ဖွဲ့တို့၊အထူးသဖြင့် ၏စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ပါတယ်၊အင်အားအကောင်းဆုံးခန့်မှန်း၏သားကောင်'ဆုံးဖြတ်ချက်အစီရင်ခံရန်။ သုတေသနလုပ်ကိုင်အရေးပါတဲ့သက်ရောက်မှုတွေအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ။ ရည်ရွယ်ချက်‐ရည်ရွယ်ချက်များဤစာတမ်းဖြစ်သည်ကိုဆန်းစစ်ရန်အချက်များအတွက်တာဝန်ရှိသင္စစ္ေဆးခ်င္ေ၏ရုရှားဖြေဆိုရန်ဆက်သွယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်အခြေအနေ။ အဆိုပါတိုက္အေဆုတ်ယုတ်သည်အလုပ်အတွက်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ တွေ့ရှိ‐ဒီလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိကြောင်းအကြံပြုင္ရန္ျအများပြည်သူယုံကြည်မှုနှင့်ကျေနပ်မှုများ၏ရဲတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူဒွန်ကြောက်ရွံ့ရဲအလွဲသုံးမှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောယခင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူရာဇဝတ်မှုအစီရင်ခံတာဝန်ရှိသည်နိုင်ငံသားသင္စစ္ေဆးခ်င္ေဆက်သွယ်ဖို့ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့။ သုတေသနကန့်သတ် ရာက္မႈ‐အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုဆိုလိုကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးတန်ဆာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများကိုချဉ်းကပ်ရန်ရဲများ၏တရားဝင်အသုံးဝင်တဲ့အခါရှင်းပြ၏ လူထုရဲပူးေသာရုရှားနိုင်ငံ။ လက်တွေ့သက်ရောက်မှု‐စက္ကူလည်းလက်တွေ့သက်ရောက်မှုဆိုင်မှ ၂၀၁၁ ရဲပဳျပင္ေျပာင္းလဲရုရှားနိုင်ငံ။ မူရင်း တန္ဖိုး‐အဆိုပါလေ့လာမှုလည်းမူရင်းဒိဌသုတေသနအတွက်ယခင်ကအောက်သုတေသနဧရိယာအများပြည်သူ-ရဲပူးေသာရုရှားနှင့်တိုးတက်မှုအနားရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်-အခြေခံမော်ဒယ်၏ပူးေ။.
ရုရှားနိုင်ငံသည်အကြီးဆုံးကမ္ဘာ့နိုင်ငံကိုကျော်ပြန့်နှံ့၊ပိုတစ်ခုထက်-အဋ္ဌမ၏ကမ္ဘာ့အကြီးစည်ပင်မြေဧရိယာဆန့်ခြင်း၊ကျော်နှစ်ခုတိုက်-အရှေ့ဥရောပနှင့်အာရှရှိ။ ရုရှားအနေနဲ့ကျနော်တို့မှာအများကြီး၊နှင့်ကမ်းလှမ်းန့်အလွန်ကြီးမားသောငွေပမာဏ၏ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု၊သော်လည်းအများအပြားတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အဆိုပါဝေးလံခေါင်ဖျားနှင့်ခက် ရောက်သောအစိတ်အပိုင်း။ သို့သော်၊အကောင်းဆုံးလူသိများသူများဖြစ်ကြ အတိအကျအတွက်မြို့ပြအစိတ်အပိုင်းနှင့်မြို့ကဲ့သို့မော်နှင့်စိန့်ပီတာစဘတ်။ အကြောင်းပြောနေတာရုရှားရဲ့အထင်ကရအဆောက်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအလိုလိုယူလို၏စုံတွဲတစ်တွဲနာရီ။ ရုရှားရဲ့သမိုင်းအဆွဲဆောင်ဆုံးခရီးအဖြစ်၊သူတို့စိတ်ဝင်စားခြင်းအားဖြင့်၎င်းဆန်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော်လည်းမည်သို့ပင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အ သား။ ထိုသို့ပြောကြား၌ရုရှားရဲ့ ပြတိုက်၏အချို့အရာတွေထဲမှာကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံး၊ဥပမာအားဖြင့်၊အ ပြတိုက်အတွက်စိန့်ပီတာစဘတ်၊အရာသည်အမှန်တကယ်လူသိများ။ သို့သော်၊ထိုအရပ်များများကြည့်ဖို့လုပ်လျှင်ခင်ဗျားဟာသဘာဝချစ်လွန်း။ သော်လည်းရှိပါတယ်ကြီးမားသောနေရာများအကြား၊သူတို့ရုရှားကကမ်းလှမ်းများစွာသောသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှု။ ဤသဘောမျိုးခုနှစ်၊ဆိုက်ဘေးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်၊နှင့်အတူအင်းအိုင်ကဲ့သို့တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအဆင်တန်ဆာအဖြစ်လူသိများ၊၎င်း၏"ရတနာ"။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊ယနေ့ရုရှားဘေးကင်းလုံခြုံအဖြစ်တာအဖြစ်အခြားနိုင်ငံများအတွက်ဥရောပနေသော်လည်း၊ယင်းပြဿနာသမိုင်းရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ၉၀ ခုနှစ်။ သို့သော်၊လျှင်သင်အပေါ်စီစဉ်နေခရီးသွားလာဖို့ရုရှားနိုင်ငံ၊စိတျထဲမှာစောင့်ရှောက်သင့်ကြောင်း ရှောင်ရှားဒေသများအနီးတွင်ယူကရိန်းနယ်စပ်၊ဒီအကြံပြုသည်မဟုတ်သောကြောင့်၊အများ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အန္တရာယ်နဲ့မတည်မငြိမ်အခြေအနေတွင်၊၊။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရုရှားအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ပါသည်၊သင်မူကားသင့်ကြောင်းစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ ရှိသည်လူသိများခဲ့ပြီးဖြစ်ပျက်၊အများအားဖြင့်လိုင်စင်မဲ့သတ္မွတ္တာဆိုရင္ေ အပေါ်တလမ်း။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါကြောင်းအန္တရာယ်အများဆုံးဒေသများအသေးစားပစ္မႈလေ့ပေါ်ပေါက်နေသောမြေ ၊ဟုခေါ်ဝေါ်။ သုံးမှသာတရားဝင်မ်ားႏွင့္အတူနည်းလမ်းများကိုတက္က၊ရေးက်သို့မဟုတ် ။ အတွက်အလွန်ဘုံရုရှား၊နှင့်အံ့သြဖွယ်ဒါဟာအများအားဖြင့်ဖျော်ဖြေအားဖြင့်အုပ်စုကလေးများ၏။ အာရုံစိုက်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ၊ဘူးထဲမှာသူတို့ကိုထားခဲ့ပါလွင်ပြင်မျက်မှောက်နှင့်အထူးသဖြင့်သတိထားတွင်စည်ကားရာနေရာများတွင်တူဘူတာနီးခရီးသွားဆွဲဆောင်မှု။ ရုရှားမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သဘာဝဘေး။ အချို့ ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြောင်းဆောင်းတွင်းကာလအတွင်းရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သောအကျိုးသက်ရောက်သွားအလာနှင့်နှောင့်နှေးယာဥ္ခ။ လည်း၊အများအတွက်ဒေသများအနီး မြန္ဂိုးလီးဇက်၊လှုပ်နိုင်ဖြစ်လာပါအချက်များကိုရှိသည်။ သည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပျက်မြောက်ဘက်တွင်ကော့ကေးဆပ်၊နှင့်ရင်ခံစာများရှိခဲ့၏င္ငံျခားတိုက်ခိုက်ခံရ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ဘယ်တော့မှလက်ခံခမဲ့အချိုရည်သို့မဟုတ်အစားအစာအခါ၌ကလပ်သို့မဟုတ်ဘားတန်း။ သောက် ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လုယက်ခြင်းသားကောင်များအပေါ်မြောက်မြားစွာကွိ။ မကြာသေးစစ်ရေးမှာဆီးရီးယားရှိပေါ်ပေါက်အမြင့်ဆုံးအကြမ်းဖက်ဝါဒရဲ့ဒေသများရှိလှုပ်ရှားမှု ၊၊၊မြောက်အရှေ့တောင်၊တောင်ဘက်အရှေ့၏အစိတ်အပိုင်း လွင်ပြင် ၊ကြောင်းတူသံကွဲ-(အပါအဝင်တောင် ဧရိယာ)၊နှင့်ဇင် ။ အပြင်ကနေ၊အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများမကြာသေးမီကခေါ်ဆောင်သွားရာအရပ်၌။ ဘတ်။ မရှိတဲ့ကမ္ဘာ-လိမ်လည်မှုအတွက်ပုံမှန်ရုရှားနိုင်ငံ: လူတွေဟာတဆင့်ပြီးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာ။ အခါသားကောင်၏သိရန်ရရှိသွားတဲ့သူတစ်ဦးရုရှားကနေတဆင့်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊နှင့်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုး၊အကြမ်းဖက်မေးခြင်းဖြင့်သူ သူမ၏(အများအားဖြင့်အမျိုးသားများကအတည္ျ)လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှလွှဲပြောင်း အချို့ငွေရှာဖို့အရှိရာတိုင်းပြည်အနာဂတ်မိတ်ဖက်ဘဝ၊သူမ၏သူမ၏ သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်မှသားကောင်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်နိုင်။ ပြီးနောက်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းဖြစ်ပါတယ်၊ထိုဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်။ အဖြစ်များအတွက်လိမ်လည်အပေါ်လမ်း၊သင်တို့ကိုရှောင်ရှားသင့်ကစားခြင်းလမ္းလောင်းကစားဂိမ်းများ။ အမျိုးသမီးယေဘုယျအားဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအတွက်ရုရှားသော်လည်း၊သင်ရှောင်ရှားသင့်ရှာဖွေကိုယ်တစ်ဦးတည်းအတွက်ကလပ်အသင်းသို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်များ၊နှင့်သင်တန်း၏လျှောက်ထားအားလုံးပုံမှန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအတိုင်းအတူရှောင်ရှားဝေးလံခေါင်ဖျားနှင့်ညံ့ဖျင်းလင်းလမ်းနှင့်ဒေသများ။ ရုရှားအတွေ့အကြုံအထကိုရောက်တော့ဒါဟာရာဇဝတ်မှုနှုန်းထားများအတွင်းမှာ ၁၉၉၀။ အကြမ်းဖက်ပြစ်မှု၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအသေးရာဇဝတ်မှုနှင့်လိမ်လည်မှုများတိုးမြှင့်ပြီ၊ဒါပေမဲ့အကြီးမားဆုံးအစိတ်အပိုင်းများ၏အကြမ်းဖက်မှုကြီးအတွင်းရာဇဝတ်အုပ်စုသူတို့ကိုယ်သူတို့၊ထိုသို့မထိခိုက်င္ငံျခားသားမ်ားအကြောင်းအများကြီး။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်လျော့နည်းကတည်းက ၉၀၊ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာအဘို့၊ခရီးသြားမ်ား၊အဓိကမြို့ကြီးများကဲ့သို့မော်နှင့် ။ ဘတ်မဟုတ်ပိုပြီးအန္တရာယ်ထက်အခြားဥရောပမြို့၊သူတို့ပင်လျော့နည်း။ ရာဇဝတ်မှုနှုန်းမော်စကို၌၊ဥပမာအားဖြင့်၊အတော်အတန်ထက်နိမ့်တဦးအတွက်နယူးယောက်၊လန်ဒန်သို့မဟုတ်ပဲရစ်၊ဒါကြောင့်သင်သင့် လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုခံစားရမှာပါ။ မှကြွလာသောအခါအဆိုပါအာဏာပိုင်အရာရှိ၊သင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်သူတို့များသောအားဖြင့်မပြောတတ်ပါတယ်၊ဒီတော့မမျှော်လင့်ပါဘူးဆိုဗမာအားဖြင့်သူတို့၏အပြင်ဘက်တွင်အဓိကမြို့ကြီး။ စကားပြောသည့်အကြောင်းအရာရွိမ်ား၊မအစဉ်အဆက်ကြိုးစားဖို့လာဘ်:သငျသညျတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်နှင့်အတူမစ္ဆန္ဒ။ စိတျထဲမှာသည်းခံလျှင်သင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်း၊အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်ရှောင်ရှားရန်ရုရှားအရည္ေသာ္လည္းမှရှောင်ကြဉ်မဆိုအများပြည်သူ၏ချစ်ကတည်းက၊အဖြစ်ဇွန်လ၏အဖြစ် ၂၀၁၃၊"ချေဝါသို့မရောက်သေး"တားမြစ်သည်၊အရာအခြေခံအားဖြင့်နည်းလမ်းများကြောင်းမည်သည့်ဆွေးနွေးမှု၏လိင်တူအခွင့်အရေးသို့မဟုတ်လိင်ကိစ္စအထံတော်၌မရောက်သေးကပေး။ ခရီးလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်အကြံပြုခရီးသွားလာရန်အမြောက်ကော့ကေးဖြစ်သောဒေသဖြစ်စဉ်းစားသည်အန္တရာယ်အရှိဆုံးအတွက်တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွာမည္။ ဧရိယာမကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းရှိတယ်အဖြစ်များရှိခဲ့ဖူးနေနှင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အမှုပေါင်းနှစ်ဦးစလုံး၏ကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်မတရားမှု။
စတင်ခဲ့သောကြောင့်အလုပ်သမားများတောင်းဆိုကောင်းလစာနှင့်တက္ကသိုလ်ဆာင္လုပ္ဖုိ။ လူရာပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့သည်အားဖြင့်ကသာရဲ့တပ်နဲ့အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားတစ်လျှောက်လုံးကျေးလက်အသေးစားအုပ်စုများ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တော်လှန်ရေးကြီးချုပ်၏အဆိုပါဆောင်းရာသီနန်းတော်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များကယာယီအစိုးရနှင့်အခိုင်အမာအာဏာရုရှားအတွက်ပြီးနောက်အတန်းအစားကသာဒီလူအတြက္ယာယီအစိုးရနှင့်ကြိုးစားကိုပြန်လည်အာဏာပိုင်ခဲ့သော်လည်းမအောင်မြင်သောအလုပ်သမားကောင်စီဆိုတာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးသွေးထွက်သံယိုတနင်္ဂနွေမှသံအလုပ်သမားများကျေမှကြိုးစားတည်ထောင်ရန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအစိုးရသောရဟန်းခဲ့သည်ဟုသစ္စာရှိအနာရောဂါငြိမ်းစရာလုပ်ပိုင်ခွင့်။ သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဒေါ်သောကြောင့်သူ၏အာဏာ'။ အဖွဲ့အစည်းများ၏တော်လှန်ရေးလုပ်ရရှိရေး၊ပထမဦးဆုံးအဓိက၊နှင့်အဓိကအားဖြင့်လုပ်တဲ့သူနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအလုပ်အကိုင်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်သိပ်မကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ '
တခြားတည်ထောင်ကျော် နိုင်ငံသားအတွက်နိုင်ငံ။ တူညီသောလမ်းအတွက်ဖြစ်သွား။ အဲဒီနှစ်ခုသဘောတရားများမှာနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်စပ်သည်။ ရုရှား၌၊အများအပြားရောထွေးနှောင်နှင့်သွား။ မဆိုအမှု၌၊ဒီဖြစ်စဉ်အကူအညီတွေအတွက်တာဝန်ယူသန်စွမ်းနှင့်လိမ္မာ။ ဒီအဓိကအားဖြင့်သက်ဆိုင်သည်မရောက်သေးသည့်သားသမီး။ ကိုယ်တော်ခန့်ထိန်းသိမ်းထားပြီးသွား? ဘယ်လိုလျှောက်ထားရန်အဘို့အအမျိုးအစားများ၏တာဝန်များအတွက်နိုင်ငံသားအဆိုပြု။ ဘယ်လိုများဤဝေါဟာရများကိုအတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှကွဲပြားခြားနား? ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသိရန်လိုအပ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်ထိုဥပဒေသည်ထိုနိုင်ငံ၏။ ပထမအဆနားလည်ရန်ဥပဒေဒေတာဘေ့စ၏။ အမှန်မှာ ရုရှားမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေ'အပေါ်သွားနှင့်သွား'။ အဆိုပါအဓိကအချက်များနှင့်စံချိန်စံညွှန်းလျှောက်ထားရန်ဤသဘောတရား။ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ။ ၄၈ ဧပြီလ ၂၄၊၂၀၀၈။ သာဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစုကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်အချိန်ဖို့အချိန်ကအချို့အပြောင်းအလဲ။ သိပ်မထင်ရှား၊ဒါပေမယ့်သူတို့ပြုပါ။ အဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်ပေးဆောင်ရန်နိုင်ငံသားများအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသောနှောင်သို့မဟုတ်သွား၏သို့မဟုတ်လူတစ်ဦး? ဥပမာအားဖြင့်၊ကိုယ်စားပြုသူအတွက်အချက်အလက်။ အဲဒါခေါ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသွားနှင့်သွား။ ဤသည်ပြည်နယ်၏တန်ခိုးနိုင်ငံတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောအဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအဆင္ေအောက်လေ့လာမှု။ အလုပ်လုပ်အပေါ်အခြေခံဥပဒေတွင်တခြား'။ ဆက်စပ်နှင့်အတူလောအပြောင်းအလဲကိုသွားပြီးတခြားအေဂျင်စီများအပြည့်အဝမှန်လွှဲသူတို့ရဲ့အင်အားကြီး၏အလောင်းများကိုဒေသခံကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အစိုးရ။ ဘယ်အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ပါဘူးဒီကိုယ်စားပြုပြည်နယ်၏။ အများကြီးရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်သူတို့အဓိကအားဖြင့်ဖြန့်ဝေရန်အရွယ်မရောက်သေးသူဖြစ်ပါပြီ မပါဘဲကျန်မိဘ၏စောင့်ရှောက်မှု။ ဒါ့အပြင်၊သွားဏာပိုင်သင့်လုပ်ရပ်အတွက်အကျိုးစီးပွားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမှီနှင့်လိမ္မာသောပုဂ္ဂိုလ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့။ ဒါဟာပြီးသားကြည်လင်သောလုပ်ရပ်များအတွက်အကျိုးစီးပွား၏။ သို့သော်အဘယ်အခွင့်အရေး၏အသွားနှင့်အသွားအလောင်းတွေ? အဘယ်တာဝန်များကိုရင်ဆိုင်နေရဒီကိုယ်စားပြု၏။ ဒီအဖွဲ့အစည်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးမျိုး။ အများဆုံးမကြာခဏကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်မရောက်သေး။ ထို့ကြောင့်အကြားအဓိကဖြစ်ပွားနေသောအလောင်းကောင်၏အချုပ်မှုစနစ်၊ကျွန်တော်တို့ခွဲခြား:ဒီအားလုံးမဟုတ်ပါဖြစ်နိုင်ခြေ၏အမှုစနစ်သည္။ ထိုသို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်သားဒီရုံးကကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အကျိုးစီးပွား၏အ ။ အသွားအလောင်းကောင်တွင်ပါဝင်မည်သည့်အငြင်းပွားမှုများအပါအဝင်၊ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွား၊ရန်ကြွလာသောအခါထိခိုက်စေပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အခွင့်အရေးများမရောက်သေး၊အနည်းဖြစ်ဖွယ်ရှိ (အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း)။ ထို့ကြောင့်၊ဒီကိုယ်စားပြု ရုရှားမှာစဉ်းစားသည်အလွန်အရေးကြီး။ တခြားအဘယ်သို့အပေါ်ဥပဒေချုပ်မှုစနစ်နှင့်သွားပေး? ဘာအင်္ဂါမထည့်သွင်း? အဘယ်အခွင့်အများ၏အသွားနှင့်တခြားအလောင်းတွေ? ဒီအဖွဲ့အစည်းပြုမူသောအမှုအတွက်အကျိုးစီးပွား၏အ ၊ကမည်သည့်အစီအမံ၏အကာအကွယ်။ အထူးသဖြင့်:ယေဘုယျအနေဖြင့်၊ဤအသေကောင်များအပြားအခွင့်အရေးနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်။ ဝန်ကြီးဌာနများ၏လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး၊အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့်တခြားနေရာဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံသားများအလှည့်ချမှတ်မီကလေးဖြစ်သောအခါအငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းထိခိုက်စေသည့်အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုပိတ်ထားတယ်။ တခြားအဘယ်အရာကိုသိရန်အရေးလူဦးရေ? ဥပမာအားဖြင့်၊ကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားကြားသွားနှင့်သွား။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဤနှစ်မျိုးသဘောတရားများ၊ဆင်တူပေမယ့်၊သူတို့နေဆဲအချို့ကွဲပြားခြားနားမှု။ လျြောညီစှာ၊အဆိုပါဂေါပကနှင့်အုပ်ထိန်းသူထံမှဝေးဖြစ်ကြတူညီသောအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအထွက်ရှာဖို့အသွား။ ရုရှားအတွက်၊ဒီအသက်တမ်းအတွက်ဟုခေါ်သည်ထိုကိရိယာ၏ပုံစံ မထိုက်သူကိုနိုင်ငံသားများကျန်ရစ်ခဲ့သည်မပါဘဲကြီးကြပ်မှု'။ အခြားအင်္ဂါ။ အ ရမည်ဖြစ်၌တည်လေသည်။ အခြွင်းချက်အခါအသေးအဖွဲသားသမီးလိုအပ်နှောင်။ နှင့်အခြား။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အချုပ်မှုစနစ်ကိုရည်ညွှန်း၏နေရာချထားအရွယ်မရောက်သေးအောက် ၁၄ အသက်အရွယ်အနှစ်။ သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ကြောင်းကြေငြာလောက်မှတစ်ဆင့်တရားရုံးကကြားနာသည်။ အဘယ်သည်တခြား? ဤဝေါဟာရပေါ်လာတော်လေးမကြာခဏဘဝအသက်တာ၌လူမျိုး၏။ မှုစနစ်တည်ကျော်သူကိုနိုင်ငံသားများ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိ ၁၄။ ဤသည်၏ပုံစံနေရာချထား၏အရွယ်မရောက်သေးဘဲမိဘ၏ပညာရေးနှင့်စောင့်ရှောက်။ လည်း၊ဒီအသက်တမ်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဖော်ပြ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအခွင့်အရေးများနိုင်ငံသားနေသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနိုင်စွမ်း။ ကြောင်း၊သွားနိုင်၊အတူသွား၊အတည္ေနှစ်ခုလုံးကျော်အရွယ်မရောက်သေးကျော်သူပုဂ္ဂိုလ်များ၏အသက်အရွယ်ရောက်ရှိ ၁၈။ ဤပုံစံ၏လူဦးရေတိကျတဲ့အလုပ်တခုကို။ ထိုသို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်သောသူတစ်ဦးချင်းစီနိုင်ကြမဟုတ်အများအပြည့်အဝနားလည်ဖို့သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကနေတရားမဝင်လုပ်ရပ်နှင့် ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။ အဓိကအ ခြားနားချက်များ၏အုပ်ချုပ်မှုစနစ်သည်အချို့သောလွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားမှု၏အကွက်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဂေါပ။ ဒါပေမယ့်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်လိုအပ်မဖြစ်မနေခွင့်ပြုချက်မှအသွားများ၏စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု။ ဥပမာအားဖြင့်အဘို့၊မည်သည့်အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်။ ယခုကြောင်းထင်ရှားသည်သွားစုံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသည်သောသူရောက်ရှိ ၁၄ အသက်အနှစ်။ လည်း၊ဒီပုံစံအဖွဲ့အစည်းလူဦးရေရဲ့ပုံပေါ်လာသည့်အခါအရန်မထိုက်။ သွားလည်းသက်ဆိုင်သည်လူငယ်ကလေးများနှင့်ရပြီသူတွေတရားဝင် ။ ဒါဟာပြီးသားပြီးပြောသောအခွင့်အရေးများ၏အုပ်ထိန်းသူနှင့်ဂေါကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ။ ဒါပေမယ့်အတိအကျအဘယ်သို့? စတင်လေ့လာမှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအစုအဝေး။ အမည်-နှင့်အတူပျောက်ဆုံးသွား။ သူတို့သို့မဟုတ်ရမယ်:အထက်ရွေးချယ်မှုများနှင့်တာဝန်များရရှိနိုင်ရန်သာအထိန်းသူ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအမှု၌၊သင့်အကာအကွယ်စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားင်းတို့၏ရပ်ကွက်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏။ တခြားအဘယ်အရာကိုသင်အာရုံစိုက်ဖို့? အမှန်မှာအသွားနှင့် တခြားနိုင်ငံသားများပေးသည်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်များကွဲပြားခြားနားသောအခွင့်အလမ်း။ လက်အောက်တွင်မည်သည့်အခြေအနေ၊စွမ်းနိုင်ငံသားကာကွယ်ရမယ်အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားင်းတို့၏ရပ်ကွက်။ သို့သော်မည်သို့အတိအကျသူတို့အခွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်? အချို့အထူးအင်္ဂါရပ်များ၏အုပ်ထိန်းသူများပေးခဲ့ကြတယ်။ အဘယ်အကြောင်းခံသောသူ?သူတို့ရပါမည်သို့မဟုတ်နိုင်:ရုရှားနိုင်ငံရှိ၊နိုင်ငံသားအားလုံးမဟုတ်နိုင်ထိန်းသူနှင့်ဂေါပ။. ဘယ်အရာကိုသင်အာရုံစိုက်လျှင်တစ်ပြည်ဆုံးဖြတ်မှတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ဒီအတွက်သို့မဟုတ်လူတစ်ဦး? ပထမဦးဆုံးသင်တို့အထဲကရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်နိုင်သူမဟုတ်ပြောဆိုချက်ကိုအခေါင်းစဉ်၏အုပ်ထိန်းသူသို့မဟုတ်ဂေါ။ အဲဒါကြောင့်အများအပြားတားမြစ်၊ကမှတ်မိဖို့လွယ်ကူ။ ဒါဟာအရေးမပါဘူး၊အဘယ်အရပ်သည်အချုပ်မှုစနစ်၏သားသမီး၊သူတို့ရဲ့အသွားများ၊သို့မဟုတ်အကြောင်းသည်မမှီနိုင်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်၊မလုပ်ခဲ့ဖို့အခွင့်အရေးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်သို့မဟုတ်:စ၊သန်၏အုပ်စု ၁ ပဳႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးဂေါပကသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူသည်။ အားလုံးပြီးနောက်၊သူတို့မကြာခဏမိမိတို့အလိုအချို့။ မပိုသိသာကန့်သတ်။ အားလုံးအခြား ကဏ္ဍများ၏လူဦးရေအများအပြည့်အဝမှန်ဖြစ်ဆောင်ရွက်မှအုပ်ထိန်းသူနှင့်ဂေါပ။ အချို့လိုအပ်ချက်များကိုအဘို့ဤပုဂ္ဂိုလ်များနေဆဲရှေ့ဆက်သွင်းထား။ သူ? ကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု? ခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ထိန်းသိမ်းထားကျော်ကလေးသို့မဟုတ်အ (အပါအဝင်မှုစနစ်)၊အတော်ကြာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာရမယ်။ အတောင်းဆိုမှုများလုပ်ကြသည်ကိုလျှောက်ထား၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အပြည်သူများမှာအောက်ပါအတိုင်း:ဤသည်အားလုံးသောရပါမည်သေချာပေါက်လေးစား။ အခြားရှုထောင့်များ(ဥပမာ၊ဝင်ငွေနှင့်အလမ္း)အားအလယ်တန်း။ ၏ဌာနချုပ်မှုစနစ်သေချာပေါက်နီးရွားႏိုင္ငံ၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များ၏ဘဝအသက်တာတစ်ဦးကသမ္မတလောင်းအတွက်အုပ်ထိန်းသူများ(ဂေါပက)၊ထို့နောက်များသည်မိမိစီရင်။ အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဆန်းစစ်သောအခါ? မှကြွလာသောအခါကလေးများသည်၊သွားနှင့်သွားလိမ့်မည်အလွန်အလေးအနက်အတွက်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများဖြေရှင်းဖို့အချိန်း၏ဂေါပကသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူသည်။ ရှိပါတယ်အချို့သောရှုထောင့်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုအတန်း၏။ အချုပ်မှုစနစ်၏ကလေးများသည်၊စဉ်းစား:အဖြစ်အလေ့အကျင့်ရှိုး၊မကြာခဏအနက် မိသားစုချည်နှောင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးဖွယ်ရှိကြောင်းတစ်ဦးကအသေးအဖွဲသို့မဟုတ် လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုသူ၏အဖွားနှင့်မတိ။ အဘယ်အရာကိုတင်ပြဖို့အသွားနှင့်ကွက်လျှင်သင်တာဝန်ယူချင်သည်ကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားအ ? အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းင့်:ကအားလုံးကိုဖွင့်။ အားလုံးပစ္စည်းများတင်သွင်းမည်ဖြစ်လေ့လာအတွက်အပြည့်အဝ။ မှုစနစ်တည်ကျော်ကကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်အလိမ္မာသောပြည်၊စဉ်းစားအားလုံးသည်ယခင်ကဖော်ပြထားသောအချက်များ။ လမ်းဖြင့်၊သင်တန်းများတက်ရောက်အနာဂတ်အုပ်ထိန်းသူတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုမပါဘဲ၊ရထံမှခွင့်ပြုချက်သွားသည်မဖြစ်နိုင်။.
ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရကုမ္ပဏီတည်ရှိပြီးတွင်စိန့်ပီတာစဘတ်၊ရုရှားနှင့်အမတ်က၎င်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအပါအဝင်မော်နှင့်အႏွဳန္းအကြီးအ။ အဘို့အကျော် ၁၃ နှစ်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောကူညီပေးခဲ့ဖောက်သည်များတစ်လျှောက်လုံးအဆိုပါနယ်မြေများကိုရုရွားအ နိုင်ငံများ။ သင်သည်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရေးဆောင်းပါးများရုရှားဥပဒေကြောင်းအဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ရုရှားဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူရုံးတွင်မော်နှင့်ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဥပဒေကိုကုမ္ပဏီမှာရုရှား ။ ဒါဟာအတွက်ဖွဲ့စည်း ၁၉၉၉။ ယနေ့တွင်၊ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရအဖွဲ့စည်းများ၏မြင့်မားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရှေ့နေများအရည်အချင်းလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ဥပဒေရုရှားနိုင်ငံ။ ကျနော်တို့ကအဖြစ်လူသိများကြသည်တစ်ဦးအပြိုင်အခကြေးငွေဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရုရှားဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည် အလတ်စားဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောအခြေခံမော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ပေးထားပါတယ်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာအဓိကနယ်ပယ်ရုရှားဥပဒေအပါအဝင်၊ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေ၊စာချုပ်ဥပဒေ၊အိမ်ခြံမြေနှင့်မြေဥပဒေ၊အလုပ်သမားဥပဒေ၊ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ရေးဆောင်းပါးများရုရှားရှေ့နေအွန်လိုင်းကဦးဆောင်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက် တွက်ရုံးခန်းများနှင့်အတူ၊ရုရှားနိုင်ငံ၊ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ဘီလာရုစ်နှင့်ဆက်စပ်ရုံး၌ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ။ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ပြီး ၁၉၉၃၊နှင့်ကုမ္ပဏီထောက်ပံ့အပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊အစိုးရမဟုတ်သောသည္။ အခြားရုံးများ:မော်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောရဲ့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် နှင့် သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအတွက် ။။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယုံကြည်ကြောင်းကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပိုင်ကုမ္ပဏီစိတ်အားထက်သန်ယှဉ်ပြိုင်ရန်၊အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖို့စိတ်အားထက်သန်နားထောငျနှင့်လေ့လာသင်ယူ၊နှင့်ဖြေရှင်းဖို့စိန်ခေါ်မှု။ ကျနော်တို့တိုင်းတာသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကျဉ်းချုပ်ဥပဒေကြောင်းအရမဟာဗျူဟာကလပ်သည်အထက်တန်းကျကျဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောပေးလိုက်ပြည့်အဝအကွာအဝေး္င္ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖောက်သည်များ။ အသင်းအပေါ်အလေးပေးထောက်ခံနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုများ၊ဖက်စပ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာနှင့်အကျိုးစီမံကိန်းများအတွက်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး၏လုပ်ငန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားဝင်ကော်ပိုရေးရှင်း(ကည္)ပုဂ္ဂလိကနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသောနှင့်အတူတည်နေရာအတွက် ။ ဘတ်နှင့်မော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ အဓိကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်ထာင္ေဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်အသိအမှတ်ပြု၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးနှင့်အကိုင်းအခက်များ၏နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊လိုင်စင်၊သိမ်းနှင့်။ ၂ ရှေ့နေအထူးနိုင်ငံခြားဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်မော်စကို။ စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်အားဖြင့်အတွေ့အကြုံရုရှားရှေ့နေများ၊ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်တစ်ခုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီမှနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ချို့တဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရုရွား။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းမှာ ၂ ရှေ့နေများအထင်ကြီးဖြစ်ပါသည်:ကျနော်တို့အနိုင်ရခဲ့ကြပါပြီ ၈၅ အမှုကိစ္စအတွက်။ အခိုင်အမာတည်ထောင်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုကုမ္ပဏီရုံးချုပ်တွင်မော်စ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ရူပါရုံပိုဆိုးတူနိုင်တဲ့ဒေသခံၽြမ္းမှကျေးဇူးတင်စကား၊အများအပြားရှုပ်ထွေးမှုများကြောင်း အောင်မြင်စွာကိုင်တွယ်ရုရှားမှာကတည်းက ၂၀၀၀။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဂုဏ်ယူနှင့်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ၊ နှင့်မိတ်ဖက်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီများအတွက်ရုရှားနှင့်နိုင်ငံခြား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်ပွားတရားစွဲဆိုခြင်း၊မိသားစုအငြင်းပွားမှုများ၊အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ၊အမွေဥစ္စာ၊အာမခံ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနိုင်ငံ၊လေကြောင်း၊အိမ်ခြံမြေများ၊နိုင်ငံခြားအိမ်ခြံမြေစတာတွေ။ ရုရှားဥပဒေတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းကြောင်းမြင့်မားသောစံ၏ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အကြီးစားကော်ပိုရေးရှင်း။ ကျနော်တို့အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းအားလိုက်နာ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စံအကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်နှင့် ဘြဲ ၂၀၁၁။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်များကိုအဆင့်ဝန္ေဆာင္မႈအညီနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ မော်စကိုရှေ့နေ၊ရှေ့နေမှာဥပဒေကမ်းလှမ်းချက်ကို၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအပြည့်အဝအကွာအဝေး၏တရားဝင်အဆောင်မှုများအများဆုံးမကြာခဏလိုအပ်သောအားဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ တွင်အခြေစိုက်ရုံးတွင်မော်နှင့်လန်ဒန်အဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအဖုံး၏အရေးကိစ္စများနှင့်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဥပဒေအဖြစ်ကိုယ်စားပြု၏။ တိုင်ပင်ခံအုပ်စုတစ်ဥပဒေကြောင်းအရကုမ္ပဏီခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင် ၂၀၀၃။ ဒါဟာအတွက်အထူးပြုတစ်ဦးဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်တတ်တဲ့မင်းဥပဒေကြောင်းအရထောက်ခံမှုအားနိုင်ငံခြားနှင့်ရုရှားကုမ္ပဏီအတွက်နယ်မြေ၏ရုရွားႏွင့္။ အဓိကလမျးညှနျ၏လှုပ်ရှားမှု:ဥပေဒအႀကံေပး၏မြေယာနှင့်အိမ်ခြံမြေ။ ရုရှားရှေ့နေတည်ထောင်ခဲ့သည် ။ အို ၁၉၉၅။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ယခုအကြီးဆုံးနှင့်အအောင်မြင်ဆုံးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီများဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်အရှေ့ဥရောပ။ ၎င်း၏အဓိကရံုးမ်ားစားေ ၊ကမ်းစီးပွားရေး၏ဗဟိုဆိုက်ပရပ်စ်နှင့်အတူ၊အကိုင်းအခက်အတွက်မော်စကို၊ဗ်၊လန်ဒန်နှင့် နှင့်။ ပုံ- နှင့်မိတ်ဖက်အဆိုင်ပူဇော်ဖို့ကျေနပ်သင်ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အချင်းနှင့်အတွေ့အကြုံပညာရှင်များအတွက်သင့်ရာဇဝတ်နှင့်အရပ်ဘက်အမှုပေါင်း။ အရည်အချင်းမြင့်မားသောရှေ့နေများ၊နှစ်ပေါင်းများစွာရှိသည်သောသူ၏အတွေ့အကြုံအတွက်ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊တရားနှင့်ပင္ပါကိုယ်ခန္ဓာရှိသည်လိမ့်မည်၊မည်သည့်ဥပဒေရေးရာအကူအညီတစ်ဦးချင်းစီမှ။
မွစ၍ၾသဂုတ္လ ၈၊၂၀၁၇၊နိုင်ငံသားများ၏၁၈ နိုင်ငံခြားပြည်ထောင်စုစေခြင်းငှါခွင့်ပြုသည့်အီး-ဗီဇာရုရှားနိုင်ငံအားဖြင့်နယ်စပ်အကူးအချက်များပေါ်တွင်တည်ရှိနယ်မြေများအခမဲ့ဆိပ်ကမ်း ။ နိုင်ငံသားများ၏အောက်ပါနိုင်ငံများရယူနိုင်သည်အအီး-ဗီဇာရုရှားနိုင်ငံ။ အအီး-ဗီဇာအခမဲ့။ ဖိတ်ကြား၊ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်အတည်ပြုချက်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကြောင်းအတည်ပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သင်တို့၏ခရီးကိုရုရွားမများအတွက်လိုအပ်သည့်အီး-ဗီဇာ။ အဆိုပါအချိန်ကာလများအတွက်ထုတ်ပေးရန်အအီး-ဗီဇာအဖြစ်သည်မရှိတော့ပါထက်ပို ၄ ပြက္ခဒိန်၏နေ့စွဲကနေရက်ပတ်လုံးတင်သွင်းခဲ့တဲ့၏ပြီးပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာကို။ အအီး-ဗီဇာရုရှားသက်တမ်းသည်ဗြိတိန်နှင့်ထွက်ပေါက်ကနေရုရွားမှတဆင့်အောက်ပါပြည်နယ်နယ်စပ်ဖြတ်ချက်များအရုရှ ရွားတည်ရှိနယ်မြေအတွက်အခမဲ့ဆိပ်ကမ်း:၁။ လေဂိတ်၂။ ဖံြဂိတ်၊၊ ၊၊၃။ ရထားဂိတ်၊၊၄။ ကားလမ်းဂိတ်၊"မိ္သား"။ အီး-ဗီဇာကိုရုရှားကတစ်ခုတည်း-ဇာထုတ္ေ ၃၀ ပြက္ခဒိန်၏နေ့စွဲကနေရက်ပတ်လုံး၎င်း၏ပေးခြင်းမပြုနိုင်။ အခွင့်ပြုထားနေဖို့အတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတစ်ခုနှင့်အတူအီး-ဗီဇာအထိ ၈ ရက်ကနေစတင်ပြီးစီး၏နေ့စွဲများ၊အတွင်း၎င်း၏သက်တမ်းကာလ။ အီး-ဗီဇာသက်တမ်းနှင့် သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုနေအောက်သည်တိုးချဲ့မရနိုင်ပါ။ အီး-ဗီဇာရုရှားနိုင်၏အောက်ပါအမျိုးသာ:မန်စီးပြားေရးဗီဇာ(ရည်ရွယ်ချက်များ၏ခရီးသည်စီးပွားရေး)၊သာမန်ခရီးဗီဇာ(ရည်ရွယ်ချက်များ၏ခရီးအရီး)၊နှင့်သာမန်သားခ်င္းဇာ(ရည်ရွယ်ချက်များ၏ခရီးဖြစ်ကြောင်းအားကစား၊ယဉ်ကျေးမှု၊သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆက်ဆံရေး)။ အကယ္ရည်ရွယ်ချက်သင်တို့၏ခရီးကိုရုရွားမကိုက်ဆို ထက်၊သင့်အဘို့လျှောက်ထားအစဉ်အလာ(မအီလက်ထရောနစ်)ဇာမှာမန်မစ်ရှင်သို့မဟုတ်္ရုံးရုရွား။ င္ငံျခားသားေရှိသည်သောသူရောက်ရှိဖို့ရုရွားအတူအီး-ဗီဇာမှာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအတွင်းနယ်မြေ၏မဲဆန္ဒနယ်ထာင္ေ၏ရုရွားအရာသူတို့အဝင်၊၏ချွင်းချက်နှင့်အတူနယ်မြေများ၊အဖွဲ့အစည်းနှင့်အဆောက်အဦများ၊အဝင်အရာအထူးခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်နှင့်အညီဖက်ဒရယ်ဥပဒေများကိုရုရွား။ နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများထားခဲ့သောနယ်မြေ၏ရုရွားသာဖြတ်သန်းဂိတ်၏မဲဆန္ဒနယ်ထာင္ေ၏ရုရွား၊သူတို့အဝင်။ သင်ဖြည့်စွက်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံအတွက်အီး-ဗီဇာကိုရုရှားကဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မထက်စော ၂၀ ရက်နှင့်အဘယ်သူမျှအကြာတွင်ထက် ၄ မီကာလအရက်စွဲအလုပ်ထဲကိုရုရွား။ သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်ရမည်သည်သက်တမ်းမှာအနည်းဆုံး ၆ လမှအရက်စွဲသင်အသုံးချတစ်ခုအဘို့အအီး-ဗီဇာ။ သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိရမယ်အခမဲ့အာကာသ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူးတံဆိပ်ခေါင်း။ င္ငံျခားသားေရှိသည်သောသူရောက်ရှိဖို့ရုရွားအတူအီး-ဗီဇာရှိသည်ရန်လိုအပ်သည်ဆေးကုသမှုအာမခံသက်တမ်းအတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းရဲ့ပိုင်နက်ကိုအဘို့အတစ်ခုလုံးကိုကာလနေထိုင်၏။ ရှိပါကသင်သည်တရားဝင်ရုရှားဇာ၊သင်ကမလိုအပ်ပါလျှောက်ထားရန်အတွက်အီး-ဗီဇာသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခမဲ့ဆိပ်ကမ်း ။ သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှင့်အတူအစဉ်အလာဇာအတွင်း၎င်း၏သက်တမ်းကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအဘို့အထောက်ပံ့ထားတဲ့အီး-ဗီဇာ။ အစဉ်အလာဇာမရဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိသည့်အီး-ဗီဇာ။ သငျသညျရှိသည်မဟုတ်လျှင်လက်ခံရရှိ၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအီး-ဗီဇာဂသို့မဟုတ်အီး-ဗီဇာငြင်းဆန်တွင်းလေးရက်ပတ်လုံး၊သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်များအတွက်ဗီဇာအဖြစ်ႏွစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာမန်မစ်ရှင်သို့မဟုတ်္ရုံးရုရွား။ အာရုံစူးစိုက်မှုကို! အမိန့်ကြော်ငြာစာအအီး-ဗီဇာဂဘူးအာမခံသင့်ရဲ့အမ်ိဳးအရုရွား။ သင်ငြင်းပွားတိုက်ခိုက်မှာနယ်စပ်ဖြတ်ချက်သင့်အခြေအနေကိုရည်ညွှန်းရန်အတွက်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ ။ ၁၁၄"အပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ထွက်ပေါက်မှအရုရွားထည့္သြင္းသို့ရုရှား ရွား"သဂုတ္လ ၁၅၊၁၉၉၆ ထလော့။ အစီအစဉ်သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုမော်နှင့် ။ ဘတ်စုစုပေါင်း ၆ လူမျိုး ၉ ရက်ပေါင်း။ ကျနော်တို့လာမှထိုင်းနိုင်ငံသို့သိသည်အတိုင်းဗီဇာမလိုအပ်။ ငါ့မေးခွန်း:ကိုယ့်အောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရာမ? အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ၏အုပ်စုများမှာထိုင်းနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားများ၊ထို့နောက်သင်လိုအပ်မည်သည့်အပိုဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများလွဲ၏။ ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်ရှိသည်ဖို့ခရီးသွားအာမခံနှင့်အပြန်လက်မှတ်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါမသိငါ၏နိုင်ငံစာရင်းတွင်မပါ၊ကရဖြစ်နိုင်သည့်အီး-ဗီဇာနှင့်အတူ ။။ ကူးလက္မွတ္? ငါဖြုန်းချင်ပါတလတွင် ။ ဘတ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်မည်သည့်အကူအညီနဲ့ကျွန်မကြည့်ဖို့မျှော်သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်အစီစဉ်တာပါသွားရောက်ကြည့်ရှုမိတ်ဆွေအတွက်မော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာကအကြောင်းပြောပါတယ် အလုပ်လုပ်တယ်င္ခြကျင်း ။ ဒါကတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားလမ်း။ငါစစ်ဆေးနှစ်ဆဖြစ်နိုင်ခြေလျှောက်ထားရန်အတွက်ဗီဇာပဲ။မင်္ဂလာပါ! ကျွန်မသေချာမရယ်၊ကျွန်တော်အမှတ်ရတယ်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ကြောင်းသေချာပါစေ၊သင်လိုအပ်ဇာကိုရုရှားနိုင်ငံ။ အချို့နိုင်ငံများမှာအမေရိကန်ရိုက်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုရုရှားဇာမပါဘဲ။ စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်သင် မိတ်ဆွေသူ သူမအလုပ်ခေါ်ယူသင်။ နှင့်အရည်အဇာမှတဆင့် လျှင်၊ကျွန်တော်မမှား၊ဒါဟာတစ္နာရီအတြင္းအဆိုပါ ဧရိယာနှင့်မပေးပါဘူးသင်သည်အမှန်ထားခဲ့ဖို့ဤဇုန်သည်။.
Orok ditarik hirup ti rusia susun runtuhna - KAOL News
© 2021 အားလုံးရှေ့နေကရုရှားအတွက်! အကြီးဆုံးရှေ့နေတယ်။